That's so good, right?: November 2016
ပါးစပ်ဖြင့် အာသာဖြေခြင်း ( Blow Job)
ပါးစပ်ဖြင့် အာသာဖြေပေးခြင်း (BJ = Blow Job)
== ပြင်ဆင်ခြင်း ==
၂ ယောက်လုံး ရေချိုးပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းအောင် ဆပ်ပြာဖြင့်သေချာအရင် ဆေးပါ
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိခြင်းက အရေးပါပါတယ်
အမွှေးအမျှင်မကြိုက်တဲ့သူကတော့ အပြောင်ကြိုရိတ်ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ် သွားကြားညတ်တတ်တယ် 😂😂 (ဆီးခုံမွှေးကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနည်းလေး တစ်ခုတော့ အောက်မှာ ရေးထားပါတယ်)
== အနေအထား ==
တစ်ယောက်က စားပွဲခုံပေါ်ထိုင် တစ်ယောက်က ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်လျက်
== စတင်ခြင်း ==
လည်ပင်း၊ ရင်ဘက်၊ ချက်၊ ခါး (မမေ့ပါနဲ့)၊ ဆီးခုံ၊ ပေါင်ခြံအတွင်းသား တွေကို အရင် စ နမ်းပါ ထိတွေ့ပါ
ဖြည်းဖြည်းခြင်းနဲ့ ပုံမှန် အရှိန်လေးနဲ့ စတင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါ
အောက်ကို စပြီး bj ပေးတော့မယ်ဆိုရင် ပျော့ခွေနေတဲ့လိင်တံကို မာလာအောင် လုပ်ပေးရတာ ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်
ဒါကြောင့် အစပျိုးနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ပစ္စည်းကို မထိဘဲ တခြားနေရာတွေကိုပဲ ထိတွေ့ပါ နမ်းပါ
စွချင်သပ ဆိုရင်လဲ ဒုတ်ဒုတ်ခြင်းရိုက်ချင်ရိုက် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဖိချင်ဖိပါ
== ပြုစုခြင်း ==
*** ဒီနေရာမှာ မှာချင်တာက bj ပေးရတဲ့သူက ကိုယ် ပေးနေရတာကို ကျေနပ်နေဖို့လိုတယ်
ကိုယ်ပေးနေတဲ့ သူကို အရှင်သခင်လို ပြုစုပေးသလိုမျိုး ဆက်ဆံပေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ ***
ပျော့နေတဲ့ လိင်တံကို တောင့်တင်းလာအောင်
*လက်ဖြင့် လုံးဝ မကိုင်ဘဲ* အစပျိုးပေးပါ
အစပျိုးပေးနေတဲ့အချိန် သူ့မျက်လုံးကို သေချာ စိုက်ကြည့်ပေးပါ
ချစ်သူပါးကို နှာခေါင်းဖြင့် မွှေးမွှေးပေးသလို ထိပ်ဖူးကို နှာခေါင်းနဲ့ အရင် မွှေးမွှေးပေးပါ
ပြီးရင် အတံဘေး ဘယ်ရယ် ညာရယ်ကို ဘာဂျာမှုတ်သလို လုပ်ပါ
ပြီးရင် လိင်တံနဲ့ ဘောကြားထဲမှာ လိင်တံအရင်း ရှိပါတယ်
အဲ့နေရာကို နှုတ်ခမ်းသားဖြင့် အသာဖိကိုက်ပါ
အဲ့နေရာကို ပါးစပ်လို့သဘောထားပြီး ဖိပြီးအနမ်းပေးတာမျိုးလုပ်ပါ
ခဏရပ်ပြီး ပေါင်ခြံကို တစ်လှည့် နမ်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့
== bj ပေးခြင်း ==
လိင်တံကို ၄ ပိုင်းပိုင်းကြည့်မည် ဆိုပါစို့
ထိပ် လေးပုံတစ်ပုံကို အရင် ငုံ ပြီးစပါ
နောက် လေးပုံနှစ်ပုံ(တဝက်) ထိ ငုံ
ပြီးတော့ လေးပုံသုံးပုံ .. နောက်ဆုံးအရင်းထိငုံ
(ဆိုလိုချင်တာ တခါထဲ ပါးစပ်ထဲ အရင်းထိ မထည့်ပစ်ပါနဲ့ ဖြေးဖြေးခြင်း တစ်ဆင့်ခြင်း တိုးတိ်ုးပြီး ငုံသွားပါ)
အာခေါင်အနောက်ပိုင်းက ပျော့ပျော့လေးနဲ့ အာခေါင်အရှေ့က အထစ်အထစ်တွေက သူ့ထိပ်ဖူးကို အရသာအပြည့်ပေးမယ့်နေရာတွေပါ
ဒါကြောင့် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်တဲ့အခါ သူ့ထိပ်ကို ကိုယ့်အာခေါင်နဲ့ မဖြစ်မနေ ထိအောင် ပညာပါပါ လှုပ်ရှားပေးပါ
သွားသုံးနည်းကတော့ နည်းနည်းခက်တယ် ပြီးတော့ တချို့က သွားနဲ့သုံးပြီးလုပ်တာကို နာလို့ မကြိုက်ကြဘူး
ဘေးကိုလဲ ဘာဂျာမှုတ်သလို နှုတ်ခမ်း၊ လျာဖြင့် ကစားပါ
ထိပ်ဖူးကို ကောင်းကောင်းစုပ်ပေးမှ ကျေနပ်တတ်ကြတဲ့ ဘဲကြီးတွေ စိတ်ထဲ ကျလိကျလိဖြစ်စေမယ့် နောက်နည်းတမျိုးကတော့ အရင်းကို အာငွေ့နွေးနွေးလေးပေးတာပါပဲ
အရင်းနေရာကို အမွှေးရိတ်မထားရင် ပိုကောင်းတယ်
အာငွေ့ပေးတာကို sexy ကျကျပေးဖို့လိုပါတယ်
အမွှေးတွေကို နှာခေါင်းနဲ့ တိုးဝှေ့ဆော့ရင်း စိတ်ထန် လာလို့ထွက်လာတဲ့ ရင်ခေါင်းထဲကလေနဲ့ "အား အား အား ကောင်းလိုက်တာ ကြိုက်လား" ဆိုတာမျိုးတွေပြောပြီး ပတ်ပတ်လည် အာငွေ့ပေးပါ
(ဒီထက် နားလည်အောင်ဆို လူစုလိုက်ပါ လက်တွေ့ သင်ကြတာပေါ့) 😁😁
လက်ဖြင့် တခြားနေရာတွေ ဆော့ပေးဖို့လဲ အရေးကြီးပါတယ်
ဘောကို ကိုင်ပေးတာ ညှစ်ပေးတာ
စအိုထဲကို လက်ချောင်းမသွင်းပါနဲ့ တချို့တွေကမကြိုက်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် လက်ညိုးထိပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် လက်မထိပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဖွဖွလေးပွတ်တာမျိုး ဖိဖိပေးတာမျိုးက လိင်စိတ်ပို တက်ကြွစေပါတယ်
== အသစ်အဆန်းကြိုက်တဲ့သူများအတွက် ==
လိင်တံပေါ်ကို အရည် အနှစ်မျိုးစုံ စမ်းပြီး ကစားကြည့်ပါ
ချောကလတ် အနှစ်၊ ပျားရည်နဲ့ သကြား၊ ရေခဲမုန့်၊ ဒိန်ချဉ်၊ jelly၊ ပူရှိန်းပါတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်
== ပြီးစီးခြင်း ==
အစုပ်ခံတဲ့သူတွေက bj နဲ့ ပြီးအောင်လုပ်ပေးပြီး ပါးစပ်ထဲကို အပြီးခံပေးတဲ့သူကို ဘယ်တော့မှ မေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ၉၉% သေချာပါတယ်
ပြီးခါနီးလေ ထိပ်ဖူး အထိအတွေ့က နူးညံလေ သူ့ကိုထိသမျှအာရုံက အကောင်းဆုံး ထိပ်ဆုံးခံစားရလေပါ
ဒါကြောင့် သူ အထွတ်အထိတ်ရောက်လို့ စတင်သုတ်ရည်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုအဓိကအသုံးပြုပြီး ဆက်တိုက် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးခြင်းက သူ့ကို နတ်ပြည်ပို့ပေးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ
လုံးဝ မရပ်ရပါဘူး သူလဲ တွန့်လိမ်နေလိမ့်မယ်
တွန့်လိမ်နေတဲ့တလျောက်လုံးကော တွန့်လိမ်တာရပ်ပြီး ချိန်ထိရော စုပ်ပေးနေရပါ့မယ်
တွန့်လိမ်နေချိန်မှာတော့ ကိုယ်ကလဲခပ်ကြမ်းကြမ်း သွက်သွက်လေး စုတ်ပေးနေရမယ်
တွန့်လိမ်နေတာ အရှိမ်နှေးသွားရင်တော့ ဖြေးဖြေးလေး အလိုက်သင့်လေး စုတ်ပေးနေရင်ရပါတယ်
လိင်တံကို ပါးစပ်ကလုံးဝ အထွက်မခံပါနဲ့
သူလုံးဝ ငြိမ်ကျသွားတာသေချာပြီဆိုမှ ပါးစပ်မှ ထုတ်ပြီး လျာနဲ့ ရက်ပေးချင်ရင် ရက် ဆက်ငုံချင်ငုံ သဘောပါ
သူကတော့ ကျေနပ်သွားတာ အသေအချာပါပဲ
ပါးစပ်ထဲ မပြီးစေချင်ရင်တော့ ပါးစပ်နေရာ လက်ကိုသုံးပါ
အရှိန်အတိုးအလျော့တွေက ပါးစပ်နဲ့ လုပ်တဲ့ အရှိန်ပုံစံတွေနဲ့အတူတူပါပဲ
တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိတဲ့သူတွေ၊ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ
ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးခြင်းဟာ သူစိမ်းတွေ ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရောဂါရှိမရှိ မသ်ိရတဲ့အတွက် ရောဂါကူးဖို့က အန္တရာယ် ရှိနေပါတယ်
ဒါကြောင့် သတိထားပြီး ပါးစပ်ထဲအပြီးခံပါ
Do at your own risk!!!
#Credit: mggaybook ဘလော့ဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by Alex Aung at 11:28 PM No comments:
ဆောင်းကာလရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြဆိုနေတဲ့ လှပသော တနင်္ဂနွေနေ့လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြာလွင်တောက်ပနေသော ကောင်းကင်ကြီး၊ ရှင်းလင်းထင်းပနေသော နေ၀န်းနဲ့အတူ အေးမြသောလေအေးအေးတို့ကလည်း ဟိုသည်မပြတ်တိုက်ခတ်နေပါရော။ ရာသီဥတုက ဒီလိုတွေသာယာနေတော့ အပြင်ထွက်ဖို့ ကျနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်တွေဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့် ကျနော်နေထိုင်သော တိုက်ခန်းသေးလေးထဲမှာ အချိန်ကုန်ဆုံးလေ့ရှိတာပေါ့နော်။ စာဖတ်မယ်၊ တီဗီအစီအစဉ်တွေဟိုပြောင်းသည်ပြောင်း ကြည့်မယ်၊ တစ်ခါတလေ အ၀တ်မပါ ဒါမှမဟုတ် boxer ဘောင်းဘီတိုလေးဝတ်ပြီး အခန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ် ၊ အပြာကားကြည့်ပြီး လူပျို့ထုံးစံ လက်သမားလုပ်တယ်ပေါ့။ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ ကျနော်နေထိုင်ရာ တိုက်ခန်းအဝေးမှာ အားလပ်ချိန်တွေကို ဖြုန်းပစ်လိုက် တော့မယ် မကောင်းဘူးလား။
တစ်ကိုယ်ရည်နေထိုင်ရတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ သဘာဝလောကကြီးအတိုင်းစီးမျောပြီးနေထိုင်ဖြစ်တာများပါတယ်။ လိင်ကိစ္စစက်ယှက်မှုကို ဘ၀ရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် စိတ်ထဲမထည့်မတွေးမိဘူးဆိုပါတော့။ အဲ…အမှတ်ရစရာအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လို့ဆိုလိုချင် တာပါ။ လူပဲဗျာ Sex ကိုချစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို သူငယ်ရဖို့ ပြောရမလား လိင်ဆက်ဆံဖို့ ပါတနာရဖို့လို့ဆိုမလား အပြင်ထွက်ရှာ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေ ဆောင်းဦးရာသီရဲ့ အေးမြလတ်ဆတ်သော လေကိုရှူရှိုက်ပြီး သူနဲ့အတူပါလာတတ်တဲ့ တောပန်းရနံ့လေးတွေကို ပိုသဘောကျတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင် ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ လိင်ကိစ္စဆိုတာ လုံးဝမရှိ မဖန်ချင်ဘူး။
တိုက်ခန်းတံခါးကို အသေအချာပိတ် ကျောပိုးအိတ်လေးထဲ ထည့်စရာရှိတာလေးတွေထည့်ကာ သွားနေကြ ပန်းခြံကျယ်ကြီးဆီ ကျနော်ဦး တည်လိုက်တယ်။ ချွေးရွှဲနေတဲ့ တီရှပ်လက်ပြတ်အကျီတစ်ထည်၊ ချွေးစိုနေတဲ့ အားကစားဘောင်းဘီတိုရယ်၊ ပြီးတော့ အနီနဲ့အဖြူစပ် ကြားခေါင်းစီးကို နဖူးပေါ်ဆံပင်တွေမကျအောင်စီးလို့ ၀တ်လို့ ပေါ့။ ပန်းခြံကျယ်ကြီးရဲ့ တစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာ အများပြည်သူသုံး သန့်စင်ခန်းတွေ့တာနဲ့ ဆီးသွားရအောင် ခဏအပြေးရပ်လိုက်တယ်။ ကျနော်သိတာပေါ့ ဂေးအတော်များများဟာ ဒီနေရာမှာ ရှာကြ ဖွေကြ ဂွင်ဖန်ကြလုပ်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် ဘယ်တော့မှ အများသုံးသန့်စင်ခန်းမှာ လိင်ကိစ္စမဖန်ဘူး မလုပ်ဘူး။
အတွင်းထဲဝင်သွားတော့ ငနဲတစ်ပွေ ဆီးသွားခုံတစ်ခုမှာ မတ်တပ်ရပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ၀င်လာမှန်းလည်းသိရော သူက ခေါင်းကို ငဲ့စောင်းကြည့်ကာ ကျနော့်တကိုယ်လုံးကို အထက်အောက် အစုန်အဆန်ကြည့်တယ်လေ။ ကျနော့်မှာ တကိုယ်လုံးအ၀တ်ချွတ်ထားတဲ့ အချိန် လူကြည့်ခံရတဲ့အတိုင်း ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ သူ့ဘေးနားကိုရောက်ဖို့နီးလာချိန်မှာတော့ အဲ့ငနဲက ကျနော့်ဘက်ကို သူ့ငပဲကြီး တန်းလန်းနဲ့ လှည့်လာတယ်။ မာတောင့်နေတဲ့ သူ့ငပဲကြီးကိုလက်နဲ့တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ကျနော့်ကို အထာနဲ့ကြည့်နေတာဗျ။
ကျနော့်ရဲ့အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်မှုကတော့ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပါပဲ နောက်ပြန်လှည့်ကာ သန့်စင်ခန်းထဲကနေ တန်းထွက်လာခဲ့မိ ပါတယ်။ တုန့်ဆိုင်းခြင်းမရှိ ချက်ခြင်းထွက်လာခဲ့တာပါ။ What the fuck? အခုမှ နံနက်ခင်း ၇နာရီထိုးပြီးစပဲရှိသေးတာ။ ပြေးနေတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း မနှေးမမြန် jogging လုပ်လာရင်း အတွေးထဲမှာ အဲ့ဒီငနဲအကြောင်းပါလာပါတယ်။ တကယ်ပြောတာ….သူ့အကြည့် နဲ့အတူ သူ့ငပဲကိုကြည့်ရတာ မာန်ပါသလို တော်တော်ထန်မယ့်ပုံလည်းပေါ်တယ်။ ကျနော့်ရွှေဥတွေထဲက ကလိကလိဖြစ်လာသလို ခံစား ရပြီး သူ့ငပဲကြီး ကျနော့်မျက်စိထဲ တ၀ဲဝဲဖြစ်နေရော။ အခုပဲဆက်ပြေးနေတာကနေ နောက်ပြန်လှည့်ရင်း အဲ့ဒီငနဲကြီးပစ္စည်းကိုကိုင်ကာ ကောင်းကောင်း ပုလွေပေးလိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် အဲ့အသုံးမကျစိတ်ကို ငြင်းဆန်လိုက်ပြီး ရှေ့ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့်အိမ်ပြန်ရာလမ်းမှာတော့ ခဏနေကငနဲရဲ့ပစ္စည်းကြီးအကြောင်းမေ့လျောသွားပေမယ့် ပေါင်ကြားကညီဘွားက တမျိုးတမည် ထကြွနေပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ခပ်နွေးနွေးဖြစ်လာတဲ့ ရာသီဥတုကိုသာယာရင်း ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ရှေ့မှာရပ်တန့်လိုက်တယ်။ ကော်ဖီလေးသောက် ဒိုးနတ်လေးစားဖို့ပေါ့။ ဆိုင်ရဲ့အရှေ့ဘက် မှန်တွေနားကပ်ချထားတဲ့ စားပွဲခုံတစ်ခုံမှာ နေရာယူလိုက်တော့ ဆောင်းဦး နေရောင်ခြည်ရဲ့ ကျနော့်အရေပြားပေါ် ဆော့ကစားနေတဲ့ အရသာကို ခံယူလိုက်ရရော။ ပြီးနောက် နားရက်အတွက် ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာ အစီအစဉ်ချ တေးမှတ်မိပါရဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လကနေ အခုထိ ပါတနာတစ်ယောက်မှ ကျနော့်မှာမရှိတာ ပြဿနာပါပဲ။ လိင်ကိစ္စအတွက်လည်း အိမ်ထောင်မပြု တစ်ကိုယ် တည်း လက်သမားလုပ်နေခဲ့တာ။ ကျနော့်စိတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပြန်လည်လေ့လာကြည့်မိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ခုန်ကျော်သွားလို့မရ မေ့လို့မရဖြစ်နေတာက ပန်းခြံအိမ်သာထဲရှိ ငနဲရဲ့ပစ္စည်းကြီးကိုပါ။ ဘယ်လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီး ဖြေသိမ့်သိမ့် မပျောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ရှင်းသန့်တဲ့ စားပွဲထိုးလေး အနားကိုလာပြီး ဒိုးနတ်နဲ့ ကော်ဖီခွက်ကိုချပေးချိန်မှ သတိပြန်ကပ်မိတယ်။ သကြားမှုန့်တွေ တရားလွန်ကပ်နေမနေ တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီးမှ ဒိုးနတ်ကို အသံမြည်အောင်ဝါးစားမိတယ်လေ။ ပေါင်ကြားကညီဘွားခမျာ တစ်ဝက် တစ်ပျက် ခေါင်းထောင်ထလာတော့ ချွေးရွှဲနေတဲ့ အတွင်းခံ boxer ဘောင်းဘီနဲ့ အပေါ်က အားကစားဘောင်းဘီတိုတွေဟာ ဘယ်လိုမှ မဖုံးကွယ်နိုင်ဘူး။ မြင်သာထင်သာကြီးဖြစ်လာတာကြောင့် ဖင်ကိုဟိုသည်ရွေ့ ဒူးနှစ်ချောင်းကို ပူးလိုက်ခွာလိုက် ချိန်ညှိကြည့်မိပါတယ်။
အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ရင်း ဒိုးနတ်ကိုကိုက်လိုက်တာ သီးမလိုဖြစ်သွားရပါတယ်။ အိမ်သာထဲကငနဲ ဆိုင်ဘက်ရှိရာလာနေတာကို မြင်လိုက်ရတာကိုး။ ပန်းခြံဘက်ခြမ်းကနေ လမ်းကူးပြီးဆိုင်ဘက်ကိုလာနေတာလေ။ Fuck! ခဏနေကလူနဲ့အတူတူပဲထင်တယ်? ပန်းခြံထဲက အိမ်သာမှာ အဲ့သည့်ငနဲကိုတွေ့တုံးက သူ့မျက်နှာကိုသေချာကြည့်မလေ့လာဖြစ်ခဲ့ဘူး စက္ကန့်နည်းနည်းလောက်ပဲ ကြည့်ပြီးပြန်ထွက်ခဲ့တာကိုး။ အာ…ဟုတ်တယ် အဲ့သည့်ငနဲပဲ အတူတူပဲ သေချာတယ်။ ကျနော် ဆိုင်ထဲကိုသူဝင်ဝင်လာခြင်း သူ့ပေါင်ခွဆုံကို အကြည့်မလွှတ်မိအောင် ကြိုးစားလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ခဏတော့ငေးလိုက်မိတယ်။
"ဟေ့လူ.." ကျနော်ထိုင်နေတဲ့ခုံရဲ့ ရှေ့ညာဘက်မှာ သူလာရပ်ပြီး အသံပြုတာမှာ ဂျင်းဘောင်းဘီထဲက ငပဲကောက်ကြောင်းနဲ့ ငုံ့ပြီး မုန့်စားနေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့တန်းနေရော။ ဂျင်းအပါးစားဘောင်းဘီရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းထဲစောင်းထည့်ထားတဲ့ ငပဲကောက်ကြောင်းက ဖုဖောင်း နေတာပါ။
ကျနော်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီငနဲက တော်တော်ချောတာပဲဗျ။ အသက်က ၂၂ ဒါမှမဟုတ် ၂၃နှစ်လောက်တော့ရှိမယ်။ ပါးစောင်တွေ မှာလည်း ရိတ်သင်ပြီးစ ခပ်စိမ်းစိမ်းအမွှေးနုလေးတွေထင်းနေတာပါ။ ကျနော့်မျက်နှာမှာ သွေးရောင်လွှမ်းသွားပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်ရပါတယ်။ ခင်ဗျားငပဲက တကယ်ကြီးသလား ထွားလားဗျလို့မေးရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် public နေရာတွေမှာ သူ့ငပဲကို လူမြင်သူမြင် ပြလေ့ရှိသလားလို့ ပြောလိုက်သင့်သလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော့်စိတ်ထဲကအတိုင်း ခဏနေက ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန် သွားကြစို့ ကီးပေးမယ်လို့ ပြောရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီမနက် အတွေးထဲဝင်နေတဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖက်ပါတနာတစ်ယောက်ရဖို့ ကြိုးစား လိုက်ရတော့မလား? ကျနော့်စိတ်ထဲ ဖျက်ကနဲ ဖျက်ကနဲ အတွေးတွေပြောင်းရင်းမှ ဒိုးနတ်ကို တစ်ကိုက်ကိုက်ပြီး ကော်ဖီနဲ့မျိုချလိုက်ရပါ တယ်။
ကျနော် ကော်ဖီကိုတစ်ငုံလောက် အမြန်မျိုချ လျှာကိုသရပ်လိုက်ရင်း "Hello," လို့ပြန်နှုတ်ဆက်အသံပြုလိုက်ပါတယ်။
"ညီတို့ တစ်နေရာရာမှာ ဆုံဖူးကြတယ်ထင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်မလား Bro” သူ ဟန်လုပ်ပြုံးရင်း စကားစတယ်။
Shit! ကျနော့်နှလုံးခုန်သံတွေ ကဆုန်ပေါက်နေပါပြီ။ ပေါင်ကြားက ညီဘွားကလည်း သူ့အသံကြားကာမှ ပိုပြီးမာတောင့်လာခဲ့ပြန်တယ်။ ဘုရားသခင်….အမှတ်မထင်ဆုံတွေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ ငနဲလေးရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်က ရုန်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးလား မသိပါ။
"ဘယ်လို ဆုံတွေ့…" ကျနော် အသံကိုထိန်းပြီး ခပ်ဖြေးဖြေးစကားပြန်လိုက်တယ်။
"အာ…ညီတို့ အရှုပ်ထုတ်တွေ လက်တွေ့ရှင်းရင်းတွေ့ခဲ့ကြတာလေ” သူ့အကြည့်က သူ့ပေါင်ခွဆုံအဖုအဖောင်းကို တချက်ရွေ့ပြပြီး ကျနော့်မျက်နှာစီပြန်ကြည့်ပါတယ်။ “Bro…Donut ထပ်ဝယ်ခဲ့ရမလား…ညီ့အတွက် ကောင်တာမှာသွားယူမလို့ဗျ”
ငနဲလေး စကားပြန်ကိုမစောင့် ကျနော့်နံဘေးကဖြတ်သွားရင်း မုန့်ကောင်တာရှိရာကို ဦးတည်နေပါတယ်။ သူ ဘယ်လိုများ ကျနော့်စိတ် အခြေအနေကိုသိသလဲ? သန့်စင်ခန်းထဲတုန်းကလည်း သူ့ဟာကိုပြကတည်းက တုန့်ပြန်မှုမပေးဘဲ နောက်ပြန်လှည့်တန်းပြန်လာခဲ့တာ ပါ။ ကျနော့်အမူအယာက အဲ့သလောက်လည်း မိန်းမမဆန်လှပါဘူး။ ကျနော်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အ၀တ်အစားတွေကလည်း ကျနော့် လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကိုဖော်ဆောင်ရလောက်အောင် မဟုတ်ရပါ။ ဘယ်လို? ဒီငနဲလေးက ကျနော့်မျက်နှာအမူအယာရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ကို ဘာသာပြန်တာ တော်လွန်းနေသလားပဲ။
“ဟေ့လူ ချွေးပြန်မနေပါနဲ့ဗျာ၊ ခင်ဗျားကြည့်ရတာ ဒီနေရာကိုလာတာ ပထမဆုံးအကြိမ်ထင်တယ်။
“ကြည့်…ညီ ဒိုးနတ်နဲ့ ကော်ဖီသွားယူလိုက်ဦးမယ်..အိုကေ? အခုအဝေးကိုမပြေးသွားနဲ့ဦး” သူ သတိပေးသွားလေရဲ့။
ဆိုင်ထဲ ခပ်ဖြေးဖြေးလမ်းလျှောက်ဝင်သွားတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ တင်ပါးတွေကို ကြည့်မိတော့ တော်တော်လှတဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေပိုင် ဆိုင်ထားတာပဲဗျ။ ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းပြီး ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီနဲ့ အံကိုက်ဖြစ်နေတော့တာ။ ဆိုင်ခန်းထဲ ခြေလှမ်းလိုက်ရင်းမှ ကျနော့် ဘက်ကို ခေါင်းတစ်ချက်စောင်းငဲ့လိုက်ကာ ခပ်သွက်သွက် မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြတယ်။ ကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးခုန်သံဟာ မြင်း တစ်ကောင် ကဆုန်ဆိုင်းပြေးသလို မြန်လာပါတယ်။ ပေါင်ကြားက ညီဘွားကလည်း မတ်ကနဲ ထောင်ပြီး ရမ်းသွားသေးတယ်လေ။ ဘယ်လို လုပ်ပြီး ကျနော်အဝေးကိုထွက်သွားနိုင်တော့မှာလဲ။ ကျနော်ထိုင်နေတဲ့ ခုံလက်ရမ်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသလို နှလုံးခုန်သံမြန်လာတာများ ပါးစပ်ကနေ ခုန်ထွက်တော့မယ့်အတိုင်းပါပဲ။
ဒီ ဒီတော့ အခုဘာလုပ်ရမလဲ? ဟိုအရင်ကမလုပ်ဘူးတဲ့ ကိစ္စကို အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်ဖို့ ခဏနေက သန့်စင်ခန်းကိုပြန်သွားပြီး ကျနော် လုပ်ချင်နေတာကို လုပ်လိုက်ရတော့မလား။ ငနဲလေးကို ဆဲလွှတ် ငြင်းဆန်လိုက်ရမလား။ ငါက ဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူး လုံးဝ ၀ါသနာမပါ ဘူးလို့ပြောလိုက်ရမလား။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်ထိုင်နေတဲ့ခုံကနေ တစ်လက်မမှမရွေ့ဖြစ်ပါဘူး။ ကျနော် ငပဲတွေကို တပ်မက်မှုတစ်ခုနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်နေဆဲပဲ။ ဒီငနဲလေး ကြည့်ရတာ သိပ်မရိုင်းပါဘူး စကားပြောကြည့်ရသလောက်တော့။ ပြီးတော့ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီထဲက ငပဲကြီးကလည်း ခေါင်း တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ ငြင်းဆန်တတ်တဲ့သဘောမရှိကြောင်းပြနေတယ်။ သူ့စိတ်တွေထန်နေကြောင်းပြဆိုရာရောက်သလို ကျနော့်စိတ်ကိုထကြွ လာအောင်စွမ်းပါတယ်လေ။ မာတောင့်ပြီး ရှေ့ကိုတန်းနေတဲ့ ငပဲကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကို ကျနော့်စိတ်ထဲကထုတ်လို့မရဘူး။ ထိပ်အရေပြားဖြတ် ထားပြီး ကြီးလည်းအတော်ကြီးတယ်ဗျ။ ၇လက်မ အတိထက် တစ်လက်မ နှစ်လက်မများစွန်းနေရော့လားပဲ သူ့ဘောင်းဘီထဲခွေနေ မှာနော်။
My God! ကျနော်ဘာတွေများလုပ်မိနေတာလဲ? ကောင်လေးကို စိတ်ထဲကနေ သူ့အ၀တ်တွေကိုချွတ်ကြည့်နေမိတာ။ စိတ်ထန်ပြီး မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲပုံကို မျက်စိထဲက ထုတ်မရဘူးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ကျနော့်တင်ပါးတွေ လိင်အင်္ဂါတွေအကုန် အလိုလိုပူနွေးနေသလို ခံစားနေရပါရဲ့။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ချစ်ပွဲဆင်ကာနီး ရင်တွေခုန် တစ်ကိုယ်လုံးပူနွေးလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပါ။
"ကဲ…ဒီမှာရော့.." ကောင်လေးပြန်လာပြီး ကျနော့်ရှေ့ကို ယူလာတဲ့ဒိုးနတ်ပန်းကန်လေးချပေးကာ ခုံအလွတ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။
Damn! သူ ကျနော်ဘယ်လိုဒိုးနတ်ကို ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိတယ်ဗျ။ သူ့ရှေ့မှာချလိုက်တဲ့ ဒိုးနတ်ကိုကြည့်လိုက် တော့ စတော်ဘယ်ရီ သကြားရည်ကွပ်ထားတာတစ်ခုရယ် အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို စားပွဲပေါ်မှာ အခန့်သားတွေ့ ရပါတယ်။
"ညီက အချိုကြိုက်တယ်ဗျ" သူက ဒိုးနတ်တွေကို တစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း ကျနော့်မျက်နှာကို ပြန်မျက်နှာမူလိုက်ပါတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျနော့်ဆီက မရွေ့တော့ဘူး။ ကျနော့်စိတ်တွေကို အသေအချာဖတ်ကြည့်နေတယ်ထင်ပါရဲ့။ ကျနော့် ငပဲခမျာလည်း အပေါ်ကိုထောင်ထရလွန်းလို့ ဗိုက်သားနဲ့ခွာမရအောင်ကပ်တော့မယ်။ တင်သားဆိုင်တွေကြားက ခရေကြွက်သားတွေကလည်း ကလိ ကလိနဲ့ ယားကျိကျိဖြစ်နေရော။
"အကိုလည်း အတူတူပဲ အချိုကြိုက်တယ်" လို့ ကျနော်ခပ်တိုးတိုးပြန်ပြောလိုက်တယ်။ နှစ်ဦးသား ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးမမူ လေထဲလွင့် နေကြသလားလို့။ ဘယ်လိုခံစားချက်များပါလိမ့်။ ဒီကောင်လေးရဲ့ နာမည်ကိုတောင် ကျနော်အခုထိသိမှမသိရသေးဘဲနဲ့။
"ညီ့နာမည်က နန္ဒပါ" သူ စတော်ဘယ်ရီ ဒိုးနတ်ကို နည်းနည်းကိုက်လိုက်ပြီး သူ့အမည်ကိုပြောပြတယ်။ ကျွတ်….သူ ကျနော့်စိတ်ကို အတိအကျ ဖတ်နိုင်တာပဲဗျ။ သူ့နှုတ်ခမ်းထောင့်မှာပေနေသော စတော်ဘယ်ရီသကြားရည်အချို့က အလွန် sexy ဖြစ်နေသလိုပဲ။ ကျနော့် လျှာလေးနဲ့ အဲ့သည့်ခရင်မ်လေးကို လျက်များလျက်ခွင့်ရရင် ရင်ခုန်သံရပ်သွားနိုင်တယ်။
"စည်သူ" သူ့မျက်နှာကို မျက်တောင်မခတ်ပြန်ကြည့်ရင်း ကျနော့်နာမည်ကိုပြောလိုက်တယ်။
အခုတော့ သူ့မျက်နှာကို အနီးကပ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ကြည့်နိုင်တာကြောင့် စူးစမ်းရာမှာ အတော်အကြည့်ခံတဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင် လေးဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။
"နာမည်လေးက မစိုးပါဘူး၊ ကိုစည်သူပေါ့နော်" သူ ပြုံးရယ်လျက်၊ ဒိုးနတ်အသားကို ကိုက်ကာဝါးလျက်၊ သူ့လျာဖျားမှာ ပေလူးနေသော သကြားပွင့်တွေကို အရသာခံလျက် ကျနော့်အား စကားဆိုပါတယ်။ အပြင်ခြံဝန်းအတွင်း ခင်းကျင်းထားသော စားပွဲခုံမှာထိုင်ရင်း ကောင် လေး မုန့်စားနေတာကို ကြည့်ရတာ ဘာလို့မှန်းကိုမသိတာ စကားသံမထွက် ငြိမ်နေမိပါတယ်။
ကော်ဖီခွက်ထဲက ကော်ဖီရည်တွေကို တစ်ငုံပြီးတစ်ငုံစုပ်ယူမျိုချရင်း နန္ဒဆိုတဲ့ငနဲလေးကို အလွတ်မပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောမိတာမှာ သူလည်းပဲ ကျနော့်စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ သူ့ငပဲကို ကျနော်မြင်ရအောင် အသေအချာကြီးကိုပြခဲ့တာပဲလေ။ သူ့ငပဲကလည်း မတ်ထောင်နေခဲ့တာများ အားရစရာ။ သူ့စိတ်ဆန္ဒတွေကလည်း အခြားဘာများရှိနေဦးမှာလဲ။ အိုး….သူ့အတွက်ဆို ကျနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသင့်ဖြစ်နေပြီ။
စကားစမြည်ပြောကြ၊ ဆောင်းဦးနေရဲ့ နေရောင်တွေအောက် ခုန်ဆွခုန်ဆွ လမ်းလျှောက်ကြ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကောင်းလေးတွေနဲ့ အလျင်စလိုမလုပ်ဘဲ အလုပ်စကြတာပေါ့။ ကျနော့်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ မနက်ခင်းအပြေးလေ့ကျင့်ခန်းအချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်မှာပါ။
"စကားမစပ်," နန္ဒက သူ့နှုတ်ခမ်းထောင့်မှာပေးနေသော မုန့်ကရင်မ်ကို တစ်ရှူးနဲ့သုတ်လိုက်ရင်းစကားစတယ်။ “ကိုစည်သူ၊ ညီ့အနေနဲ့ နည်းနည်းရိုင်းတယ်လို့ တွေးနေမလားပဲ” အဲ့စကားကိုပြောရင်း ပန်းခြံဘက်ကို ခေါင်းတစ်ချက်ဆတ်ပြကာ စကားဆက်ပါတယ်။ “ဒီနေ့ မနက် အိပ်ယာထတော့ ပေါင်ကြားက ငပဲက အတင်းခေါင်းထောင်ထနေတာ၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အာသာဖြေတာထက် တစ်ယောက် ယောက်နဲ့ ကိစ္စရှင်းရင်ပိုကောင်းတယ်လို့တွေးမိခဲ့တယ်။ အာ…ဆောရီးဗျာ…အကို့ကို စော်ကားသလိုများဖြစ်သွားလားမသိဘူး”
"ရပါတယ်…အကို့ကို တစ်မျိုးတစ်မည်အတွေးပေါက်တာမျိုးတော့ မလိုချင်ဘူးဗျ။ နန္ဒကို ရိုးရိုးသားသားပြောပြရရင် သေးပေါက်ချင်လို့ လာခဲ့တာ။ အဲ့တာကြောင့်လဲ ဘာမှမမြင်သလိုလုပ်ပြီး နောက်ပြန်ဆုတ်ပြန်လာခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့…ဒါပေမဲ့ အကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စအပေါ် သတိမထားခဲ့တာ သေချာတယ်။” ကျနော် မထိန်းနိုင် တစ်ချက်ပြုံးရယ်လိုက်မိပါတယ်။
“ဒါပေမဲ့???” နန္ဒက သူ့မျက်ခုံးကိုပင့်ပြီး ကျနော့်စကားကိုဆက်ဖို့အထာပေးပါတယ်။
"အဲ…ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို public ဧရိယာလို ပြင်ပမှာဘယ်တော့မှလုပ်လေ့မရှိဘူးလေ။ အဲ့လိုလုပ်တာက နည်းနည်းမလုံခြုံသလိုခံစားရ သလားလို့။ ဘယ်လိုပြောရမလည်း အံ့သြစိတ်လှုပ်ရှားတာတော့ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်”
နန္ဒ သဘောတကျရယ်ပါတော့တယ်။ ကျနော်သိတယ် နန္ဒတစ်ယောက် ကျနော့်အထာပေါက်သွားတယ်ဆိုတာ။
"ကြည့်…ညီတို့ အစကတည်းက ခြေလှမ်းမှားနေကြတာပဲ” တဲ့ နန္ဒကပြောပါတယ်။
နှစ်ဦးသား ခပ်ရွံ့ရွံ့နဲ့ ရယ်မောမိကြတယ်။ ကျနော်တို့ အပြန်အလှန်စိတ်လှုပ်ရှားနေမိကြတာ သိသာထင်ရှားနေကြသလို ပေါင်ကြားက ညီဘွားတွေမတ်နေကြတယ်ဆိုတာလည်း သေချာတယ်။ မာတောင့်ရှည်လျားလှတဲ့ သူ့ငပဲကြီးနဲ့ ကျနော့်ပါးပြင်တွေကို တဖတ်ဖတ်ရိုက် ၊ အာခံတွင်းအဆုံးထဲထိ အ၀င်အထွက်ပြု၊ အာ…ခရေ၀ထဲ အားရပါးရ ဆောင့်ဆောင့်သွင်း…စိတ်ကူးထဲမှာတင် ကျနော်အားရမိပြီ။
"နှစ်ယောက်သား သပ်သပ်ကြီးဖြစ်နေကြတယ်ထင်တယ်။ အကို့နေရာကို ညီလိုက်ချင်လား?"
"ကျနော်တို့နှစ်ယောက်?" နန္ဒက ပြန်အမေးထုတ်ရင်း သူ့ပေါင်ခွဆုံကို တစ်ချက်ငုံကြည့်ပါတယ်။
သူ ကျနော့်ကိုလိပ်စာမေးဖို့စကားစတယ်ထင်နေခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲကိုစကားပြောနေတာပဲဗျ။ “သူက ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်ဗျ သဘောတူတယ်တဲ့” နန္ဒဆိုတဲ့ ငချွတ်က အတော်နောက်တတ်တာပဲ။ သူ့ငပဲကိုလက်နဲ့အသာဖိပြပြီး ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ကျနော့်ကို စကားဆက်ပြောပါတယ်။
နှစ်ယောက်သား နောက်တစ်ကြိမ် ရယ်မောမိကြပါတယ်။ ငနဲလေးနဲ့ စကားပြောဆက်ဆံရတာ တဖြည်းဖြည်း ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သားတွေ့ကြတော့ သူ့ငပဲကြီးပြပြီး နှုတ်ဆက်တယ်၊ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းနည်းတော့ ရွံရှာမိခဲ့တယ်ပြောရပါမယ်။ နောက်တော့လည်း ကျနော် စပြီးသာယာလာမိတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျနော် လုံးဝ ရမ်းကားကြမ်းတမ်းသူဖြစ်သွားပါပြီ။ နန္ဒကို ကျနော်နဲ့အတူ လိုက်လာစေချင်မိပြီ တကယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အ၀တ်စတစ်ခုမှမရှိတဲ့ပုံ ကို ကျနော်မြင်ချင်နေပြီဗျာ။ ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ ကျနော့်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကို အပေါ်ကနေငုံ့ကိုင်း ဒိုက်ထိုးနေတဲ့ခံစားမှုမျိုးရချင်တယ်။ အာ…ပူပူနွေးနွေးအရာကြီး ကျနော့်ခရေ၀ထဲတိုးဝင် တိုးထွက်တဲ့ဖီလင်ကို အလွန့်ကိုလိုအပ်နေပြီ။
မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် ကျနော်နေထိုင်ရာအခန်းကို နှစ်ယောက်သားခြေကုန်သုတ်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ဆန္ဒတွေပေါက်ကွဲဖို့စလုပ် ကြတယ်ဆိုပါတော့။ နန္ဒတစ်ယောက် အခန်းထဲခပ်မြန်မြန်ဝင် သူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ် ငပဲကြီးထုတ် ကျနော့်ကို ဒူးထောက်ခိုင်းတာ လုပ်တော့မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတာပါ။ သူသာ အလောသုံးဆယ်လိုချင်ရင် ကျနော်က ဖြည့်ဆီးပေးဖို့အသင့်ပါပဲ။ နှစ်ယောက်သား ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်လိုက်ကြပြီးနောက် နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့ကာ အနမ်းပြင်းပြင်းနမ်းကြပါတယ် လျှာတွေရော နှုတ်ခမ်းသားတွေကော ပူထူတဲ့ အထိပေါ့နော်။ သန်မာတဲ့သူ့လက်မောင်းတွေနဲ့ ကျနော့်ကိုထွေးဖက်ထားသလို ကျနော်ကလည်း သူ့လည်တိုင်ကိုလက်နှစ်ဖက် နဲ့ ရစ်သိုင်းတာ မလွှတ်မိပါဘူး။ မာတောင့်နေတဲ့သူ့ငပဲအဖုအဖောင်းဟာ ကျနော့်ပေါင်ခြံကိုတွန်းတိုက်ဖိကပ်နေတော့ ငပဲဆိုဒ်ကိုမှန်းလို့ရ ရင်ခုန်လို့ရနေပါတယ်။
နန္ဒလေ..ကျနော့်ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေကို ဆွဲချွတ်ပေးတယ်။ အမွှေးမရှိရင်အုပ်၊ ချက်ဆီကိုမတ်ပြီးကပ်နေတဲ့ ငပဲ၊ တွဲရရွဲ ရွှေဥ၊ ဖြောင့်စင်းနေသော ပေါင်တံတွေနှင့် ခြေဖ၀ါးအစုံဖြင့် သူ့ရှေ့မတ်တပ်ရပ်နေရပါရော။ အသက်ရှူသံခပ်ပြင်းပြင်းထွက်နေတဲ့ သူ့အနားမှာ လှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဘဲ မတ်နေတဲ့ငပဲနဲ့ မြန်နေတဲ့နှလုံးခုန်သံနဲ့ ကျနော်ရပ်နေခဲ့တယ်။ နောက်တော့ သူ ကျနော့်ကိုဆွဲဖက်ပြန်ရင်း လုပ်လက်စ အနမ်းစစ်ပွဲကို မွတ်သိပ်တပ်မက်စွာပြန်နွှဲပါတယ်။ မာတောင့်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲဟာ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီသားကို ပွတ်တိုက် နေတာပေါ့။ စိုစွတ်နေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ကျနော့်လည်တိုင်စီ နေရာပြောင်းသွားပြီးနောက်မှာတော့ အထိအခတ်မခံ နည်းနည်း မာတောင့်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်တိုက်စုပ်ပြုတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဗိုက်သားပြင်တစ်ဝိုက် ချက်တစ်ဝိုက် လျှာဖျားလေးနဲ့ ဆက်ကလိပြီးပြန်တော့ ကျနော့်ငပဲခေါင်းတစ်ဝိုက်ကို နွေးထွေးစိုစွတ်နေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ တို့ထိပွတ်တိုက်ကစားပါတယ်။
နန္ဒတစ်ယောက် ကျနော့်တင်ပါးအစုံကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ထိန်းကိုင်အားပြုရင်း ဒူးနှစ်ဖက်ကိုထောက်ထိုင်နေရင်း သူ့အာခံတွင်းဖြင့် ကျနော့်ငပဲကို အားရပါးရ အထုတ်အသွင်းလုပ်ပါတယ်။ ကျနော့်ဒူးအစုံ ရုတ်တရက် အားနည်းယုတ်လျော့သွားသလို အထောက်အကူ မဲ့သွားသလို ခံစားရတာကြောင့် သူ့ဦးခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထိန်းကိုင်အားပြုလိုက်ရတယ်ဗျာ။ ကျနော့်ငပဲခေါင်းအဖျားလေးကအစ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်ထိတဲ့အထိ ခပ်ဖြေးဖြေးခြင်းဖိကပ်သထက်ဖိကပ်မိအောင်ကြိုးစားတယ်။ ကျနော့်ငပဲတစ်ခုလုံး ကို သီးခြင်း အော့အံ့လိုဟန်ပြခြင်းမျိုးတွေ မဖြစ်ဘဲ အလွယ်တကူ မျိုချလိုက်နိုင်တဲ့သူ့ကို အံ့အားသင့်မိပါရဲ့။ အသံဗလံတွေမြည်တဲ့အထိ ကျနော့်ငပဲကို စုပ်တယ် လျက်တယ်လေ။
လက်နှစ်ဖက်နဲ့ထိန်းကိုင်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ထဲက တစ်ဖက်ကိုခပ်ဖြေးဖြေးလွှတ်လိုက်ရင်း တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကြားထဲက အကွဲကြောင်း ထဲ တိုးဝင်လာတဲ့လက်ချောင်းတွေရဲ့ ခံစားချက်ကိုရလာတယ်။ခရေ၀ရှိတဲ့နေရာကို တည့်တည့်ကြီးတိုးဝင်လာတာပဲ။ ကျနော့်မှာ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားရသလို ခံစားချက်အဟုန်ဟာလည်း အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုအဖြစ် အဆင့်မြင့်လာရပါပြီ။ သူ့လက်ချောင်းတွေ ကျနော့်ခရေ၀ထဲတိုးဝင်လာချိန်မှာ သတိထားမိရတာကတော့ လက်ချောင်းလေးတွေဟာ သူ့တံတွေးအချို့နဲ့စိုစွတ်နေတယ်ဆိုတာပါ။ အလွယ်တကူ တအိအိတိုးဝင်လာမှုနဲ့အတူ ကျနော့်စိတ်တွေ မယိုးမရွဖြစ်အောင် ကလိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ လက်ချောင်းတွေကို ကျနော့် ခရေကြွက်သားတွေနဲ့ ဖျစ်ညှစ်မှုလုပ်မိချိန်မှာတော့ ငပဲကိုပါးစပ်အပြည့်ငုံထားတဲ့ နန္ဒဆီမှ သာယာမိန့်မူးတဲ့အသံထွက်လာတာကိုကြား လိုက်ရပါတယ်။ လှုပ်ခါသွားတဲ့ ကျနော့်တင်သားဆိုင်တွေရဲ့အထိအတွေ့ကိုသူခံစားရမိပုံပါ။ ငပဲထဲကနေ သုက်ရည်တွေ အားရပါးရ ပန်းထုတ်မိတော့မယ်…အား။
"အိုး…ဘော်ဒါကြီး" နန္ဒ သူ့တံတွေးများဖြင့် စိုရွှဲပြီး အရည်တလဲ့လဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကို လွှတ်ချလိုက်ရင်း မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ပါ တယ်။ ကျနော့်ခရေ၀ထဲ နှိုက်လက်စ သူ့လက်ချောင်းတွေကိုတော့ မထုတ်မပြု ထိမ်းကိုင်ထားလျက်ပဲ အတော်ဆရာကျပါရဲ့။ “အကို့ ခန္ဓာကိုယ်က အတော်လှတာပဲဗျာ…အတော်လှတယ်…I want you, baby” သူ့လည်ချောင်းထဲက လှိုက်တက်လာတဲ့အသံနဲ့ပြောပါ တယ်။
Baby? သူ ကျနော့်ကို ဘေဘီလို့ခေါ်ပြောလိုက်သလား? My God. ကျနော့်ကျောပြင်ထဲက ဖျဉ်းကနဲ တွန့်ကနဲ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်သွားကာ တကိုယ်လုံး နည်းနည်းတုန်ခါသွားမိရပါတယ်။
"အ၀တ်တွေချွတ်…နန္ဒ…အ၀တ်တွေချွတ်တော့ကွာ..ကိုယ့်ကို အ၀တ်တွေချွတ်ပြနော်" တောင်းပန်ခယသောလေသံနဲ့ ကျနော့်ဘာသာ မထိန်းနိုင်စွာတောင်းဆိုလိုက်မိတယ်။
မတုံ့ဆိုင်းဘဲ သူ့အ၀တ်တွေကိုချွတ်ပစ်လိုက်တာ ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်လောက်တဲ့ ကိုယ်ဟန်အထင်းသားပေါ်လာပါရော။ ရင်အုပ် ၂ခုကြားဝယ် အမွှေးနုများရှိနေပြီး သူ့ချက်ကနေ ဆီးစပ်အထိ အမွှေးနုလေးတွေအကြောင်းလိုက်ဆက်စပ်နေတာပါ။ သူ့ငပဲကြီးက လည်း အခြားငပဲများနဲ့မတူ တမူထူးပါတယ်။ ကျနော်မှန်းဆထားတာထက်ပိုကြီး ပိုရှည်လားတဲ့ အမျိုးသားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကြီးပါပဲ။ ချပ်ရပ်ကျစ်လစ်နေသော ကြွက်သားများနဲ့ဗိုက်သားပြင်၊ သန်မာခုန်းထနေသော ပခုံးကြွက်သားများ၊ ပြိုင်မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ ပေါင်တံ တွေလို တောင့်တင်းသန်မာလှတဲ့ ပေါင်တံတွေရယ်၊ ခိုင်မာကျယ်ပြန့်သော ခြေဖ၀ါးအစုံနဲ့ နတ်သားတစ်ပါးအလားထင်ရပါတယ်။
အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်တည်ခွင့်ရနေခဲ့ပုံဟန်နဲ့ ကျနော် ဆိုဖာတစ်လုံးပေါ်အသာလှဲလျောင်း ပေါင်တံတွေကိုးကားရင်း လာပါ ချစ်ပွဲဝင်ပါလှည့် လို့ သူ့ကို တောင်းဆိုနေမိပါတယ်။ အံဝင်ဂွင်ကျ ဒါပေမဲ့ ခပ်ဖြေးဖြေးလေးလုပ်ပါကွာ။ ဒီငနဲလေးကို အားလုံးပေးဆပ်လိုက်တော့မယ်။ ပန်းခြံတစ်ခုရဲ့ သန့်စင်ခန်းထဲက အမှတ်မထင်တွေ့ဆုံခဲ့ရသော ငနဲလေးရဲ့ ရမ္မက်လှိုင်းတွေအစား အခုတော့ ခပ်ငြိမ်ငြိမ်အတွေ့အကြုံ ရင့်သော သူ့ရွေ့လျားမှုတွေကြားမှာ ကျနော်ငေးနေမိပါတယ်။ ဖိတ်ခေါ်နေသော ကျနော့်ခြေတံတွေကြားက ကော်ဇောပေါ်မှာ သူ ဒူးထောက်ထိုင်နေရင်း ကျနော့်ပေါင်တံတွေကို အထက်အောက် အသာအယာပွတ်သပ်ပါတယ်။ မာကျောတောင့်တင်းသော သူ့ငပဲထိပ် နဲ့ ကျနော့်ခရေ၀ကို တို့ထိကစားချိန်မှာတော့ တကိုယ်လုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်တွေ စီးဆင်းသွားသလို တဆတ်ဆတ် ခံစားရပါရော။ ပူနွေးနေတဲ့ အဖုအထုံးတစ်ခု ခရေ၀ကို တံခါးလာလာခေါက်နေတယ်လေ။
"အကို့ကိုလုပ်စေချင်သလား…ကိုစည်..သူ?လုပ်ရမလား..ဟင်" ကျနော့်လည်တိုင်နဲ့ ပခုံးသားတွေကို ငြင်ငြင်သာသာ ငုံ့ကိုင်းနမ်းပြုရင်း မေးမြန်းတော့ ကျနော့်ခရေ၀ခမျာ မယိုးမရွဖြစ်ရသလို ထိုးသွင်းဆက်ဆံဖို့ငံ့လင့်လှပါပြီ။
"နန္ဒ….ခဏစောင့်" ကျနော် သူလုပ်တာကိုဟန့်လိုက်မိတယ်။
"အင်း…ညီ…နည်းနည်း ပေတာပြုတာဖြစ်မှာစိုးလို့…ရော့…ချောဆီနဲ့ ကွန်ဒုံး"
ကျနော့်ခရေကြွက်သားတွေ အလိုက်သင့်ပြေလျော့နေမိချိန်အထိ သူ့ငပဲက တိုးဝင်လာတာမရှိသေးဘဲ အပြင်မှာတန်းလန်းရှိနေဆဲ။ ကျနော် သူ့ကို ကွန်ဒုံးမပါဘဲ လုပ်ခွင့်ပေးသင့်ပါ့မလား? အလွှာမပါ ကမ္ဘာမခြားဘဲ ဒီအတိုင်းထိုးသွင်းဆက်ဆံတာက အာသာဆန္ဒပိုပြည့် သလို ခံစားရပေမဲ့ စွန့်စားရာတော့ကြလွန်းပါတယ်။ စွန့်စားမှုလုပ်သင့်သလား?
အ…သူ့လက်တွေ ခပ်သွက်သွက်အလုပ်များသွားပြီးနောက်မှာတော့ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ငပဲခေါင်းကြီးဟာ ကျနော့်ခရေ၀ထဲ တိုးဝင်လာ ပါတယ်။
အကာအကွယ်သုံးဖို့ ဘယ်သူဂရုစိုက်ကြသလဲ? အ..ကျနော်တော့သွားပြီ…နစ်ဝင်သွားပြီ…တဖြည်းဖြည်းငုံ့ကိုင်းတိုးကပ်လာတဲ့ ရင်ခုန် ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ထဲမြုပ်သွားပြီ။ ဒီကောင်လေးရဲ့ ငပဲကြီး အတွင်းထဲရောက်နေနှင့်ပြီ။ Dear God! နာကျင်မှုတွေက တိုးပွားလာပေမယ့် အခြားခံစားမှုတွေက ကျောထဲဖျဉ်းကနဲထပြီး ဖိန်းရှိန်းလာတာပိုတယ်။ ကျနော် တင်သားကိုနေရာရွေ့ပုံစံပြောင်းပေး လိုက်တော့ သူ့ငပဲကြီး ကျနော့်ခရေထဲပိုပိုတိုးဝင်လာပါတယ်။
ကျနော့်ခြေတံနှစ်ဖက်နဲ့ သူ့ခါးအစုံကို ရစ်သိုင်းတွယ်ချိတ်ကာ ငပဲကို အတွင်းထဲဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင် ဆွဲဆွဲယူမှု လှုပ်ရှားသမှုပြုဖြစ် ပါတယ်။ သူ့မျက်နှာကတော့ ကျနော့်ရင်အုံအနှံ့ ပွတ်သပ်လှုပ်ရှားနေရော။ ကျနော့် ရင်အုံပေါ်က ပဲစေ့လေးတွေကို ပွတ်သပ်တယ်၊ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ကိုက်ဝါးတယ်၊ လျှာလေးနဲ့ ကလိကလိလုပ်တယ်…အား သွားနဲ့ကိုက်နေတယ်။ သူ့လက်အစုံဟာလည်း ကျနော့် တကိုယ်လုံးအနှံ့ ပွတ်သပ်နေ တယ်၊ ကြင်ကြင်နာနာပွတ်သပ်တယ်… ဆိတ်တယ်…အ။ ကျနော့်အရေပြားဟာ သူ့အတို့အထိအောက်မှာ တစစ်စစ် တကြွကြွ တရွရွဖြစ်နေရပါတယ်။
နန္ဒ ငပဲကို ကျနော့်ခရေ၀ထဲ နက်သထက် နက်အောင် လျောသွင်းနေပါတယ်။ နာကျင်မှုက နည်းနည်းတော့ နောက်ပြန်လျော့သလိုပဲ။ သူ့ရွှေဥတွေနဲ့ ကျနော့်တင်သားဆိုင်အောက်ပိုင်း ထိကပ်သွားတာကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ မမှီတမှီရွှေဥတွေကို လက်နဲ့အသာ ကျနော် ဖျစ်ညှစ်လိုက်တော့ နန္ဒနှုတ်ဖျားက မိန့်မူးသာယာသံအချို့ထွက်လာတယ်လေ။ အံအားသင့်စရာ သူ့ငပဲရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က အပြင်မှာ ရှိနေဆဲပါ။ သူ့တင်ပါးအစုံကို ပိုမိုဖိနှိမ့်အောင် ကျနော်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ သူ့ငပဲအရင်းက အဖျားပိုင်းထက်ပိုပြီးတုတ်နေတယ်ဗျ။ အာ.. ကျနော့်ကြိုးစားမှုကို ရပ်လိုက်တယ်။ သူ့ဘာသာသူ တဖြည်းဖြည်း အဆုံးထိဝင်အောင်ကြိုးစားပြန်တော့ ငပဲအရင်းပိုင်းလျောဝင်ချိန်မှာ ကျနော် အသံထွက်အော်ညည်းမိရပါရော။ ဒီငနဲလေး သူ့ပစ္စည်းကို အထုတ်အသွင်းအဆင်ချောအောင်ကြိုးစားနေတာနဲ့တင် ကျနော့်မှာ မျော့ချင်နေပြီ။
နှစ်ဦးသား လိင်ဆက်ဆံမှုစတင်လိုက်ချိန်မှာတော့ စလုပ်ချိန်ကထက်စာရင် ကျနော်အသင့်ဖြစ်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ ကျနော့်ငပဲလည်း ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်မှုနဲ့အတူ ထိပ်ဝမှာ အရည်ကြည်တွေစို့စပြုပြီပေါ့။ ခါတိုင်း ခရေ၀ကိုသုံးပြီး လိင်ဆက်ဆံချိန်တိုင်း ကျနော့်ငပဲ က အခုလို မာတောင့်ခါရမ်းနေမှုမျိုးမဖြစ်ဘဲ ပြန်ပျော့ပြောင်းသွားစမြဲပါ။ အခုတော့ နန္ဒလုပ်ဆောင်မှု အထုတ်အသွင်းပြုတိုင်း ပြုတိုင်း မာတောင့်နေသလို ရမ်းခါနေတာလည်း တကယ် အချိန်ကိုက်။ မွတ်သိပ်ပြင်းပြတဲ့ သူ့အထုတ်အသွင်း ဆောင့်ပြုမှုတွေဟာ အရှိန်ရလာ တော့ နာကျင်မှုကို သိပ်မပြင်းစေတော့ပါဘူး။ အနည်းငယ် နာကျင်မှုနဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်လာမှုကို ခံစားလာရပါတယ်။ တကယ်လို့ bottom မနေဖူးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ငနဲတစ်ပွေရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့ငပဲကို ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက် ဆွဲထုတ်လိုက် တဖောင်းဖောင်း ဆောင့်သွင်းဆက်ဆံခံရချိန် ဘယ်လို ဖီလင်ခံစားရမယ်ဆိုတာ ကျနော်ပြောပြနေတာ သဘောပေါက်မယ်မထင်။
ကျနော် တခြားအကြောင်းအရာကို စိတ်ပြောင်းပြီး အာရုံလွှဲလို့လည်းမရ တစ် နှစ် သုံး လေး ဂဏန်းတွေ ရေတွက်လို့လည်းမဖြစ်နိုင် တော့ပါဘူး….။ နန္ဒ တစ်ယောက် သူ့ဇာတ်လမ်း အဆုံးမသတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ ကျနော်သိပေမယ့် ကျနော်ကတော့ သုက်ရည်တွေကို အားရပါးရ ပန်းထုတ်လိုက်ပါပြီ။ နန္ဒတစ်ချက် ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း သုက်ရည် တစ်ပွက် တစ်ပွက် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျနော့် ခရေကြွက်သားတွေဟာ မာတောင့်နေတဲ့ နန္ဒငပဲကို အစွမ်းကုန် ဖျစ်ညှစ်လိုက် ပြေလျော့လိုက်လုပ်တာပေါ့နော်။
"Oh, baby," နန္ဒ သူ့အသက်ရှူသံခပ်မြန်မြန်ထွက်နေဆဲအချိန်တွေကြား တိုးတိုးငြင်သာညည်းညူပါတယ်။ "ပန်းပစ်လိုက်…yeah.. ကို့ သုက်ရည်ပူတွေကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ဗျာ…ရှီး…ကို့အထဲကိုလည်း ညီ့သုက်ရည်တွေပန်းထည့်မှာနော်…အ"
သူ့ငပဲကို ကျနော့်ခရေ၀ထဲ ပိုပိုဝင်အောင် ထိုးသွင်း ဆောင့်သွင်းနေဆဲဖြစ်သလို ကျနော့်တင်သားဆိုင်တွေနဲ့ သူ့ရွှေဥတွေ တဖတ်ဖတ် ဖိရိုက်မိတဲ့အထိ ဖိကပ်နေဆဲဖြစ်သလို သန်မာတဲ့ သူ့လက်အစုံကတော့ ကျနော့်ခြေထောက်တွေကို ကိုင်တွယ်ထားနေဆဲပါ။
"အာ…နန္ဒ…တကယ်မိုက်တယ်ကွာ..အာ" ကျနော်အသံခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ဟစ်လုနီးပါး အသံထွက်မိတယ်။ "ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ကျွေးကွာ…အိုး…ငါ့ကောင်…မင်းအရည်တွေကို ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တော့…အာ fuck fuck oh fuck meeeee."
ဘယ်လိုအသံတွေနဲ့ အော်ညည်းတာ တောင်းဆိုတာတွေ လုပ်မိနေမှန်း ကျနော်မသိတော့ပါဘူး။ ကျနော်သိတာကတော့ သူ့ဆောင့်သွင်း ဆက်ဆံနေမှုအပေါ် သာယာသလို သူ့သုက်ရည်တွေ ပန်းထည့်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို လိုလားနှစ်သက်နေပါပြီ။ တောင်းဆိုတာတွေ တောင်းခံတာတွေကို မရှက်မကြောက် လုပ်နေမိသလို ကျနော့်မျက်ဝန်းထောင့်တွေကနေ ပူနွေးမျက်ရည်များ တစ်သွင်သွင်စီးဆင်းနေ တာကိုလည်း အလွယ်တကူ ခံစားမိရပါတယ်။ နန္ဒရဲ့ လှုပ်ရှားထိုးသွင်းမှုများကြောင့် ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျနော့်ငပဲဟာ ခေါင်းပြန်ထောင် လာပြီး ဒုတိယအကြိမ် သုက်ရည်ပန်းထုတ်ဖို့ဖြစ်တည်စပြုလာပါရော။ ဘယ်လိုမှမယုံနိုင်ပါဘူး…အရင်ကလည်း မဖြစ်ဖူးဘူးလေ။ ခရေ၀ထဲ ငပဲထိုးသွင်းဆက်ဆံချိန်မှာ သာယာတာဖြစ်ဖူး ခံစားဖူးနေပေမဲ့ ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ် မကိုင်မတွယ် မဆွမပြုဘဲ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည် မာတောင့်လာဖို့ဆိုတာ ရှားပါးအဖြစ်အပျက်ပါ ကျနော့်အတွက်။
ခဏအကြာမှာတော့ ကျနော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်း ကျနော့်နှုတ်ခမ်းသားများကို ငုံ့ကိုင်းနမ်းရှုံ့ရင်း နန္ဒတစ်ယောက် မထိန်းနိုင်စွာ သူ့သုက်ရည်တွေကို ခရေ၀ထဲ ဖိဖိပြီးပန်းထည့်ပါတယ်။
"FUCK, ညီ…..ပြီး….ပြီးပြီ" နန္ဒ ဘေးလူကြားမှာမစိုးရိမ်တဲ့အတိုင်း အော်ညည်းပါရဲ့။
တစ်လျော့ပြီး တစ်လျော့ ပန်းထုတ်ပြီးတဲ့အထိ သူ့ငပဲကို ကျနော့်တင်သားဆိုင်တွေထဲ မြုပ်သထက်မြုပ်အောင်ကြိုးစားလျက်ပါ။ သူ့ နောက်ကျောပြင် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲတွန့်သွားသလို သူ့မျက်နှာပေါ်က ချွေးစက်အချို့ဟာလည်း ကျနော့်မျက်နှာဘေးကိုကျသလို သူ့ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းလှုပ်ရှားပြီးနောက် မျက်ဝန်းတွေ မှေးမှိတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က အငြိမ်မနေ သူ့နို့သီးခေါင်းလေး တွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့အသာအယာညှစ်ပြုလိုက်တော့ ကျန်ရှိ သူ့သုက်ရည်တွေကို ထပ်ပြီးပန်းထည့်ပါတယ်။ ကျနော့်အထင် သူ့ သုက်ရည် ပန်းထုတ်တာ မပြီးဆုံးတော့သလို ပေါက်ကွဲတော့မတတ် အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတဲ့ ငပဲဟာလည်း တွင်းအောင်းလို့ မဆုံး သေးဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်။ နန္ဒဆိုတာ အတော်သန်မာတဲ့ ငနဲလေးပါပဲလား။
သူ ကျနော့်ရင်ခွဲထဲ လဲကျလှဲလျောင်းသည့်အချိန်ထိ သူ့သုက်ရည်နောက်ဆုံး တစ်လျော့ကို ပန်းထုတ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
"Baby, you are beautiful."
သူ့ငပဲကို ဆွဲထုတ်ပြီး ကွန်ဒုံးကိုချွတ်နေစဉ်အချိန် သူ့သုက်ရည်အချို့ ကျနော့်ရွှေဥတွေပေါ်စိုသွားတာကို ခံစားရတယ်ဗျ။ စိုစွတ်ဆဲ မမာ မပျော့သူ့ငပဲကို ကျနော့်ခရေ၀နဲ့ တဖျတ်ဖျတ်ရိုက်ခတ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်အထဲပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားတာကြောင့် ကွန်ဒုံးအသစ်ကို အမြန်ပဲ ကျနော်စံချိန်သစ်နဲ့ စွပ်ပေးလိုက်ရတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူဘာစိတ်ကူးပေါက်လည်းမသိဘူး ချောဆီအများကြီး ညှစ်ထည့်လိုက်ပြီးမှ ငပဲကို ပြန်သွင်းတယ်။ ဘုရားတရမလားဘဲ မယုံနိုင်စရာ သန်မာတဲ့ ငနဲလေးပါ။ အခုပဲ တစ်ကြိမ်ပြီးထားတာကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ် ဆက်ဆံဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြန်ပြီ။ ကျနော် ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ် လက်နဲ့ဆွဲကိုင်ပြီး ခပ်မြန်မြန်ပဲ ကစားဖြစ်ပါတယ်။ မသိဘူး…ဘာမှမသိဘူး ခပ်မြန်မြန်ပဲ လက်ကစားမိတာပါ။ နန္ဒကလည်း သူ့ငပဲကို ခရေထဲထိုးသွင်းဆက်ဆံတာ မြန်ချက်က သူ့ရွှေဥတွေနဲ့ ကျနော့်တင်ပါးတွေ တဗြန်းဗြန်း ရိုက်ခတ်သံဆူညံနေတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်စိတ်တွေ အရှိန်မြင့်ပြီး climax မဖြစ်ခင်မှာပဲ သူ့သုက်ရည်တွေကို ဒုတိယအကြိမ် ပန်းထုတ်လိုက်တာကို ခံစားသိရှိရပါတယ်။ နန္ဒ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်သည်မသိ ကျနော့်ငပဲကို လက်နဲ့အသာဆုပ်ကိုင် သူ့ကိုယ်ကိုငုံ့ကိုင်းပြီး ပါးစပ်က နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ရစ်သိုင်းစုပ်မျို လိုက်ပါတယ်။ သူ့သုက်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်လို့မပြီးခင်မှာ ကျနော့် ကိုယ်ပိုင်သုက်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိပါရဲ့။ သူကတော့ ကျနော့်ငပဲကို စုပ်မျိုနေဆဲ သုက်ရည်တွေကိုမျိုချနေဆဲ ကျနော့်ခရေ၀ထဲ သူ့ငပဲကို အထုတ်အသွင်းပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် သူ့ပြုစားချက်တွေထဲ သေဆုံးခဲ့ရပြီပေါ့။
အပေါ်က ပြောပြခဲ့တာတွေ ရေးပြခဲ့တာတွေက နန္ဒနဲ့ ကျနော် ဘယ်လိုချစ်သူတွေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာရဲ့ အစပါပဲ။ ဆောင်းဦးကာလ ပထမဆုံးရက်တစ်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ခင်းမှာ ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ခုပေါ့။ လူတကာစုံတဲ့ သန့်စင် ခန်းထဲက ခပ်ထွားထွားငပဲတစ်ချောင်းကို အာရုံစိုက်မိတဲ့ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ ကျနော့်အိပ်မက်တွေထဲကပုံရိပ် ထပ်တူမကျမှုကနေ ပေါက်ပွားလာတာ။ ကျနော် ကျနော့်လူကိုချစ်တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ သူ့ကို ကျနော်တွေ့ဆုံခဲ့ရတာ ဘာပြောရမှာလဲ။ So fucking what?
Alex Aung (13 Nov 2016)
Posted by Alex Aung at 11:18 PM No comments:
Being Proud Of and Comfortable With Being Gay (Part III)
မိမိဖြစ်တည်မှုအတွက် စိတ်လက်ချမ်းသာ ဂုဏ်ယူပါ (Being Proud Of and Comfortable With Being Gay)
(၁) စာဖတ်သူ တစ်ယောက်တည်း တစ်ကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှတ်ထားရပါမယ်။ စာဖတ်သူဟာ ဂေးဆိုပါလျှင် ဒီကမ္ဘာလောကကြီး ပေါ်မယ် လိင်တူကြိုက် အမျိုးသား(gay)၊ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီး (lesbian)၊ လိင်တူ/လိင်ကွဲ နှစ်မျိုးစလုံးကြိုက်သူ(bisexual)၊ ပြီးတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုသာ ကြိုက်သူ သဘောကျသူ (straight) ဆိုတဲ့ပုံဟန်မျိုးစုံနဲ့အတူ စာဖတ်သူရဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနေဖူးသူတွေ စသဖြင့် များမှ တကယ့်အများကြီးပါ။ ယုံမှားသံသယတွေ၊ အပြစ်တစ်ခုအသွင် နားပူနားဆာလုပ်ခြင်းတွေ၊ မသေချာမရေရာခြင်းတွေကို သူတို့တွေ အားလုံး ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ စာဖတ်သူရဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုရမ္မက် ဖွင့်ဆိုခြင်းအသစ်တစ်ခုအဖြစ် မတွေးထင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ လက်အောက်ကနေ လွန်မြောက်ခွင့်ရတဲ့ ကျွန်တစ်ယောက်လို့ကောပေါ့။ ဒီနေရာမှာ ဂေးဖြစ်နေရခြင်းဟာ အမှားတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ စာဖတ်သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ယုတ်ညံ့နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျ။
ကိုယ်မေးမြန်းစူးစမ်းမှုတွေအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်မယ့်လူမျိုးကို စာဖတ်သူရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ဒေသန္တရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘုရားကျောင်းကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ သို့မဟုတ် စာဖတ်သူရဲ့မိဘတွေကို ပြန်ပြောတတ်တဲ့ အစီရင်ခံတတ်တဲ့ သူတစ်ပါးကိုဝေဖန် တတ်စွာ သို့မဟုတ် ဆိုးရွားစွာတုန့်ပြန်တတ်သောသူများ မဟုတ်ဖို့တော့လိုမှာပါ။ ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုအပေါ် စာဖတ်သူ ယုံကြည်မှုပိုလာချိန်မှာတော့ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ပူပေးတတ် သံယောဇဉ်ရှိလွန်းသော သူငယ်ချင်းများနှင့် မိမိရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို ပြောပြ ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
Gay, lesbian, bisexual, pansexual, transgender ဒါမှမဟုတ် ကြားအခြေအနေတရပ်ရပ်လို့ဆိုနိုင်မည့် ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုမှာရောက်နေ ခြင်းဟာလည်း အဆင်ပြေတာပဲလေ။
စာဖတ်သူ ရဲ့ အတွင်းသဏ္ဌာန်အကြောင်း ခံစားရအောင် အနှုတ်လက္ခဏာမြင်သွားအောင် ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းများဟာ တကယ့်သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်တွေဆိုပါက စာဖတ်သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်နေခြင်းဟာ အရေးမပါဘဲ ချစ်ခင်ကြ ခင်မင်ကြမှာပါ။ စာဖတ်သူရဲ့ မိဘများဟာလည်း သားသမီးကိုချစ်တယ် နားလည်ပေးတတ်တဲ့သူတွေဆိုပါလျှင် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဖြစ်နေခြင်းပဲဆိုဆို ဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်သူကို ဂရုတစိုက် တလေးတစားရှိကြမှာပါနော်။
စာဖတ်သူကို ဆိုးဆိုးရွားရွားတုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်သူများဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာများအမှန်တကယ် မုချရှိနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အမြတ်ဒေါသ တွေကို အခြားသူများပေါ် ဖွင့်အံပုံချတတ်တဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဘာသာသူတို့ရှုပ်ယှက်ခတ်နေကြသူများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုပြုသူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် မပျော်ရွှင်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။
(၂) ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ ကာမဆက်ဆံသူ(heterosexual)ဖြစ်တည်ဖို့ လေးနက်စွာထပ်တလဲလဲပြောဆိုတိုက်တွန်းတတ်သူများကို ဂရုတစိုက် ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့သည် စာဖတ်သူ ဘယ်လိုလူမျိုး ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိကြဘူး သို့မဟုတ် သူတို့ယုံကြည်ထားတာကို အတည်ပြုချက်ယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို စာဖတ်သူဆင့်ပွားမွေးစားအောင် ဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ “ခေါင်းရှုပ်ခြင်း” သို့မဟုတ် “စမ်းသပ်လေ့လာနေ”တာတွေ စာဖတ်သူမှာ ကောင်းကောင်းဖြစ် တည်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူဘာဆိုတာ စာဖတ်သူပဲဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာတစ်မျိုးမျိုးခေါ်တွင်နေတယ်ဆိုပါလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုခေါ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ဖို့အခွင့်အာဏာ စာဖတ်သူပဲပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
(၃) စာဖတ်သူရဲ့ ဖိုမလက္ခဏာ/လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကို ရှာဖွေဆန်းစစ်ဖို့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လမ်းကြောင်းများစွာရှိနေတယ်ဆိုတာလဲ နားလည်သဘောပေါက်ရပါမယ်။ အချို့သောသူတွေဟာ သူတို့သည် လိင်တူကြိုက်နှစ်သက်သူ(gay)များဖြစ်ကြောင်း အသက်အရွယ် အစောပိုင်းကာလတွေမှာကတည်းက သိကြပါတယ်။ အခြားသောသူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့အစစ်အမှန်သဘောသဘာဝကို တွေ့ရှိဖို့ အချိန်ယူကြရပါတယ်။ နောက်တော့လည်း ကိုယ်ဘာဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်များ နှင့် ယိမ်းယိုင်မှုများကို ဘယ်လိုအကန့်အသတ်နဲ့ထုပ်ပိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတ ရုပ်တုဆိုတာများ ဒီနေရာမှာမရှိပါဘူး။ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ လမ်းဟာ သေချာတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ခံစားယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခံစားမိတဲ့ လမ်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရှာဖွေ တွေ့ရှိချက်အပေါ် ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးခံရသလို ကြိုးစားနေထိုင်ပါ။ အချို့သူတွေကတော့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးလိုလို အယူအဆ အဖုံးအအုပ်များ နဲ့ နပမ်းလုံးနေတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့သည် လိင်တူကြိုက်နှစ်သက်သူများ (gays) များဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ ၀န်မခံတတ်ကြပါဘူး။
လူအချို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအပေါ် နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အသားတကျနေထိုင်မှုစရိုက်အနည်းငယ်က ရိုက်ခတ်မှုလှိုင်းကြီးထွား နိုင်တာကိုလည်း နားလည်ရပါမယ်။ ထိုအရာတွေဟာ သေချာပေါက်အမှန်တရားတစ်ခုလို့ မဆိုနိုင်သလို စမ်းသပ်ခံတဲ့အကြောင်းအရာ တော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ မိသားစုတစ်စုမှာ ဖခင်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မနေရခြင်း၊ အမေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဖြင့်ယဉ်ပါးနေခြင်း သို့မဟုတ် ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင် စအိုနဲ့လိင်အာသာဖြေတပ်မက်မှု ဖွံ့ဖြိုးခြင်းအဆင့်ဆင့်ပေါ်တွယ်ငြိနေခြင်းတွေကြောင့် လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ တစ်ထစ်ချပြောနိုင်ပါ့မလား။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုယ်တွင်းဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာက အဓိကလမ်းကြောင်းပေးသွားသလဲ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းပါတယ်။
(၄) ဖိုမလက္ခဏာ/လိင်စိတ်ဆန္ဒ/လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု ဆိုတာကို အကြောင်းအချက်အချို့ပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြည့်ဖို့ကတော့ အတော် ရှုပ်ထွေးတဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေတာကို နားလည်ပါ။ ကိုယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်သေခံချက်ကို အထူးသီးသန့်ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အပြင်ဖိအားများ ကြောင့်ဆိုတာမဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာပြောဖို့ရှိတာက သူတစ်ပါးရဲ့ထင်မြင်ချက် သူတစ်ပါးရဲ့လမ်းကြောင်းပေးမှု သူတစ်ပါးရဲ့ ပြောပြချက်တွေကနေ ဖိုမလက္ခဏာတွေအပေါ် အရိပ်မိုးလာတဲ့ အချက်များစွာရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဖိုမလက္ခဏာ အတိုင်းအတာတိုင်းအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ရပ် - အချို့အချက်တွေက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုသာ ကြိုက်နှစ်သက်သူ သို့မဟုတ် လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် အထူးသီးသန့်လို့ပြောရမယ့်ပုံဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပုံမှန်လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို ပြင်ပမှသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖော်များကိုကြည့်ပြီး ဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်လို့မရတာပါ။ အချို့ အမျိုးသမီးခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူ (Lesbian) တွေဟာ အမျိုးသားလိင်ဆက်ဆံဖက်ပါတနာကို တစ်ခါတရံရှာဖွေတတ်ကြပြီး အချို့လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား(gay) တွေဟာ အမျိုးသမီး လိင်ဆက်ဆံဖက်ပါတနာကို ရှာကြံတတ်ကြလို့ပါပဲ။
လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုရဲ့ ဒီဂရီ အတိုင်းအတာများစွာရှိနေပါတယ်။ တကယ်လို့စာဖတ်သူဟာ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးလုံးကြိုက်နှစ်သက်သူ (bisexual) တစ်ယောက်ဆိုပါလျှင် အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ်ကွဲတစ်ခုရဲ့အောက်မှာ အလွယ်တကူ အံဝင်ဂွင်ကျ သင့်ကိုယ်သင်ရှာဖွေလို့အဆင် မပြေလောက်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်လိုဖြစ်နေနိုင်တယ် ဘယ်လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသည့်တိုင်အောင် သို့မဟုတ် မသိဘူးဆိုလျှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တံဆိပ်အကပ်မခံပါနဲ့။
လိင်(ကျား/မဖြစ်မှု) တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေသည်ဆိုပြီး အမြဲဂရုထားအာရုံစိုက်နေဖို့မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ကွဲပြားခြားနားနေမှုအခွင့်အရေးရှိပြီးသားမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ အမျိုးသားဆိုရင် စိုးမိုးတတ်တယ်၊ အမျိုးသမီးဆိုရင် အလျှော့ပေးတတ်တယ်ဆိုသော သာမန်လိင်စိတ်သဘာဝကို အလေးပေးဇန်းတင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲ့သည့်အချက်တွေက စာဖတ်သူရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအပေါ် ချည်နှောင်တုပ်ထားတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ အလျော့ပေးဆက်ဆံတတ်သော straight အမျိုးသားတွေရှိသလို လိင်ကိစ္စမှာ ပိုမိုဦးဆောင်စိုးမိုးတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအများအပြား ရှိနေကြပါတယ်။
(၅)တစ်စုံတစ်ယောက်က သူတို့ရဲ့လိင်မှုကိစ္စအပေါ် ကျေနပ်စိတ်ချမ်းသာမှု သို့မဟုတ် နားလည်သဘောပေါက်လက်ခံထားမှုကို စာဖတ်သူ အနေနဲ့ ခြေထိုးခံလှဲဖြိုဖို့ မကြိုးစားသင့်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဟ၀န်ခံခြင်းမပြုဘဲ ပုဂ္ဂလိကသဘောထားခြင်း အပေါ် လေးစားသမှုရှိရပါမယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို ဖွင့်ဟ၀န်ခံလာဖို့ဆိုတာ အခက်အခဲနှင့် အတော်ရှုပ်ထွေးတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဟ၀န်ခံလာဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခက်တွေ့အောင် အခက်အခဲဖြစ်အောင် မပြုလုပ် ရပါ။
ကိုယ့်ဖိုမလက္ခဏာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဆိုတာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲလို့ စာဖတ်သူ မကြည့်မမြင်ရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေရမှုတစ်ခုရှိနေကြောင်း စောင်းပါးရိပ်ခြေ ပြောနေခြင်းမည်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ ရှာဖွေမှုခရီးစဉ်တစ်ခုသွားနေတယ်လို့လေ။ ကိုယ်သိချင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကိုယ်မေးမြန်းချင်နေတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးပြုဆွေးနွေးအဖြေရှာလို့ရမယ့် ကိုယ်လိုပဲ အခြေအနေတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေရသူများရှိရာ လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာလပ်တစ်ခုကိုရှာကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကိုယ်ဟာ Lesbian လား၊ Gay လား၊ ဒါမှမဟုတ် Bisexual တစ်ယောက်လား ဘယ်လိုမှ မခွဲခြားထားဘူးဆိုသော်မှ လိင်တူချစ်သူများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အကူအညီ တစ်ထောင့်တစ်နေရာအဖြစ်ပါဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လူသစ်ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကိုထိတွေ့စူးစမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် တာထွက်မှု စတင်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၆) ဖိုမလက္ခဏာ/လိင်မှုကိစ္စတွေဆိုတာ ပျော်ရည်တစ်ခုလိုပဲ အရာရာမှာပျော်ဝင်နိုင်တယ် ပြီးတော့ အထောက်အထားများလည်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ စာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲ တွေးထားရပါမယ်။ ကိုယ်ဟာ လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူ အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟ၀န်ခံပြီးသူလူအချို့ဟာ ပြုမူပြောဆိုတာ သို့မဟုတ် ၀တ်စားဆင်ယင်တာတွေဟာ လေ့လာမိသလောက် ဂေးပိုဆန်ပြစပြုကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့ သူတပ်ဆင် ၀တ်ဆင်လိုက်တဲ့ တံဆိပ်တစ်ခုအောက်မှာ ထုံးစံအတိုင်း အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်လိုခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ကိစ္စ တစ်ခုပြုကျင့်လိုက်တာမဟုတ်ပေမဲ့ အဲ့ဒီအမူအကျင့်ဟာ အဆိုပါလူအတွက် အတုယောင် သို့မဟုတ် အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုပါလျှင် ထိခိုက်နာကျင်စေသောအချက်တွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက စာဖတ်သူဟာ အရင်ကထက် ဂေးပိုဆန်လာနေသလိုပဲလို့ စတင်စွပ်စွဲလာပါလျှင် သူတို့ကိုမသိကျိုးကျွန်ပြုလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူနေရမည်ဖြစ်သလို ဘယ်လိုပြုမူသင့်တယ် သို့မဟုတ် ဘယ်လိုဝတ်ဆင်သင့်တယ် သို့မဟုတ် ဘယ်လိုပြောဆိုသင့်တယ် သို့မဟုတ် ဘယ်လိုလမ်းလျှောက်သင့်တယ်ဆိုတာကို တစ်ယောက်ယောက်ပြောခံနေရတာမျိုးကနေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလိုက်ပါ။
(၇) စာဖတ်သူအနေနဲ့ သတိရသင့်တဲ့အချက်က ပုံစံစုံလူအမျိုးမျိုးကို စွဲလမ်းနှစ်သက်နိုင်သလို စိတ်ခံစားမှုအရ သို့မဟုတ် ကာမဂုဏ်အာရုံအရ တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ် လုံးလုံးလျားလျားပစ်ကျနိုင်သေးတာပါပဲ။ လူတွေအတော်များများယုံကြည်ကြတာက သူတို့မွေးဖွားကတည်းကမွေးရာပါ လိင်အင်္ဂါသတ်မှတ်ချက်လှုံ့ဆောက်မှုအရ လိင်စိတ်ဆန္ဒတိမ်းညွတ်မှုရှိမယ် ပြီးတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းအရာတွေကို မလုပ်ကြဘူး လို့လေ။ ဒါပေမဲ့ အထောက်အထား ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလျှင်တော့ အရာအားလုံးမှားတယ်လို့မဆိုနိုင်သလို မှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ လိင်တူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်မှာ စွဲလမ်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလျှင် စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကိုယ့်လိင်ကိစ္စ identify နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုလဲလို့ စိတ်တွေဝေသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက စံသတ်မှတ်ထားချက်တွေ မျှော်မှန်းထားချက်တွေ နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်မှတ်ဖို့ အံဝင်ဂွင်ကဖြစ်မနေဘူး မဟုတ်လား။ စာဖတ်သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် gay, lesbian, straight, queer, bisexual ကဲ့သို့ထပ်တူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာဆိုတာ တံဆိပ်မကပ်ချင်ဘူးဆိုလျှင်လည်း အဆင်ပြေ တာပါပဲ။
စာဖတ်သူ အနေနဲ့ ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်လိုသူနှင့် ချစ်ခင် သို့မဟုတ် လိင်ကိစ္စပတ်သက်ယှက်နွယ်ချင်သူနှင့် စိတ်တင်းကြပ်မှုမရှိဘဲ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ခံစားချစ်ခင်ပတ်သက်ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဘောင်အတွင်း စည်းအတွင်းအမြဲနေထိုင်သွားရမယ် လို့ သတ်မှတ်ထားတာမှမဟုတ်တာဘဲ။ ပြောရတာက လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရတာထက်လွယ်ပေမယ့် အခြေခံမူအရပြောချင်တာကတော့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက် အမှန်ဖြစ်ဖို့လို့သလို ရိုးသားဖို့လိုပါတယ်။ လူအချို့အတွက်က ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုသာ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတယ်၊ အချို့တွေကတော့ လိင်တူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုသာ ချစ်ခင်နှစ်သက်နိုင်တယ်၊ အချို့တွေ ကတော့ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးစလုံးကို ချစ်ခင်နှစ်သက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ စာဖတ်သူဟာ ဘယ်တံဆိပ်အောက်မှာမှ အံဝင်ဂွင်ကျ မဖြစ်ဘူးလို့ ခံစားရတယ်ဆိုပါက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တံဆိပ်တစ်ခုကပ်ဖို့ ဖိအားပေးမကြိုးစားပါနဲ့။ စာဖတ်သူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်၊ အချစ်နှင့် လိင်ကိစ္စအကြောင်းရှာဖွေစူးစမ်းရင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလိုက်ပါ။
မေးမြန်းစူးစမ်း (Community Q&A)
Q: အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်အနေနဲ့ ကိုယ့်လိင်မှုကိစ္စအကြောင်းသိထားဖို့ ငယ်သေးတယ်လို့ထင်ပါသလား?
Ans: ဒီအကြောင်းအရာကိုသိဖို့ အရွယ်လွန်နေပြီ သို့မဟုတ် အလွန်ငယ်သေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။ လိင်မှုကိစ္စ စိတ်သဘော ထားဟာအမြဲပြောင်းလဲနိုင်တာဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာပဲထိန်သိမ်းထားပါလို့။
Q: လိင်တစ်မျိုးထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါသလား?
Ans: ဟုတ်ကဲ့၊ "Kinsey scale of sexual behavior"ဆိုတဲ့ စစ်တမ်းပြဓာတ်ပုံတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာပါတဲ့ အဆင့်ငါးဆင့်ထဲမှာ စာဖတ်သူဟာ နံပါတ်တစ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အံဝင်နေသလား ဒါမှမဟုတ် နံပါတ် ၅ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အံဝင်နေသလားဆိုတာကြည့် နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ လိင်အပေါ်မူတည်ပြီး အခြားဘယ်လိင်အမျိုးအစားကို စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်တာပေါ့နော်။
Q: ကျနော်က အမျိုးသမီးတွေကို ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖို့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ အမျိုးသားတွေကိုတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ ဒါက ကျနော့်ကို bi ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုဖြစ်အောင်လုပ်နေသလိုများ?
Ans: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တံဆိပ်တစ်ခုတပ်ဖို့ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး ဘော်ဒါရာ။ တကယ်လို့ Label တစ်ခုတပ်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်း bisexual လို့သတ်မှတ်လိုက်လည်း မဆိုးပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တံဆိပ်မကပ် လေဘယ်မထိုးဘဲနေနိုင်တာပဲလေ။ ပြေးလမ်းရှည်ကြီးတစ်ခု မှာ သက်သောင့်သက်သာနည်းလမ်းနဲ့ လျှောက်လှမ်း ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ အရေးပါအောင်လုပ်ဖို့ လိုရင်းပါ။
Q: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာဆိုတာ အချက်အလက်တွေအရကော စူးစမ်းမှုအရကောသိနေပေမဲ့ မိဘတစ်ယောက်ယောက်က အဲဒါဂေးမဟုတ် ဘူးလို့ ပြောနေတုန်းပဲဆိုလျှင် ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရပါ့မလဲ?
Ans: ဘော်ဒါ့ကို သူတို့တကယ်ချစ်ခင်တယ် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုအပေါ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုပါလျှင် ကိုယ်ဘာဆိုတာကို မိဘများအား ယဉ်ယဉ်ကျေး ကျေး နုညံ့ညင်သာစွာပြောလိုက်ပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟာ ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာ သူတို့ကိုပြောလိုက်ပါ။ ဘော်ဒါဟာ ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခု၊ ဒီကိစ္စအတွက် ဂုဏ်ယူသလို တစ်နေ့နေ့မှာ သူတို့လက်ခံမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါ။ တကယ်လို့ သူတို့က ဘော်ဒါပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်၍ လက်မခံသေးဘူးဆိုပါလျှင် ကိုယ်ဟာဘာဖြစ်တယ် ဘယ်လိုဖြစ်တည် နေပါတယ်ဆိုတာပြောဖို့ အနည်းဆုံးရှောင်ကြဉ်ရတော့မယ့် အမေးစကားလို့ဆိုရမလားဘဲ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာ ဘော်ဒါ့ ကို အထောက်အပံ့ပြုမယ့်လူတွေကို ရှာဖို့သင့်ပါပြီ။
(၁) ကိုယ့်ဖာသာနေပါ။ စာဖတ်သူ လိင်တူကြိုက်သူတစ်ဦးဖြစ်နေခြင်းအတွက် ရှုံ့ချပစ်တင်နေသောသူများကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါ။
(၂) လမ်းညွှန်သူတစ်ယောက်ပြောစကားအရ “ကုထုံးပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ရှာဖွေရာမှာ ကူညီဖို့ဖြစ်ပြီး၊ သင်ဘာဆိုတာကို သူတို့တွေးထင်မိတာပြောခဲ့တယ်ဆိုပါလျှင် သူတို့ဟာ ကုထုံးပညာရှင်ကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး” တဲ့။
(၃) လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခု အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ရာဟာ သင်ဂေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လို့ လူတွေက ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် စိုးရိမ်စိတ်မကဲပါနဲ့။ သူတို့ပြောတာကို နားထောင်မနေပါနဲ့။ စာဖတ်သူရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသော လူတွေထဲက အချို့ဟာ လိင်တူချစ်သူ ဂေးတွေဆိုတာ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဂေးဆိုပြီးတော့ စိုးရိမ်စိတ်ဝင်မနေပါနဲ့လေ။ အခြားသူတွေရဲ့ အတွေးထင်မြင်ချက်တွေအပေါ် အလေးထားဂရုမူမနေဘဲ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုအတိုင်းနေထိုင်ပါ။
(၄) ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟာ အခြားသူမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ပါပဲ။ အခြားသူများရဲ့ တွန်းတိုက်လှဲချမှုကြောင့် လဲပြိုသွားဖို့မသင့်ပါဘူး။ စာဖတ်သူ ဘာဆိုတာ လက်မခံတဲ့အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ အမြဲတစေ နေနေဖို့မှမလိုတာ။ စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်နှလုံးကို အမြဲပွင့်လင်းမြင်သာရိုးရှင်းစွာထားသည် ဆိုပေမဲ့ ထောင့်ကွယ်က အချို့အချက်တွေကိုတော့ ဘယ်သိနိုင်ပါ့မလဲ။
(၅) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဆန္ဒကလည်း နည်းနည်းထူးဆန်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ စာဖတ်သူကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီလိင်အမျိုးအစားပုဂ္ဂိုလ်ကို မကြိုက်နှစ်သက်ဘူးလို့ မဆိုနိုင်ဘူးဗျ။ စာဖတ်သူဟာ ပိန်ပိန်ပါးပါး ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့လူ သို့မဟုတ် အားကစားသမားပုံစံပေါက်တဲ့လူ သို့မဟုတ် ရင်သားသေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမှပိုသဘော ကျသူဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ လိင်တူ သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ကူးယဉ် ကြည့်ပါ။ စာဖတ်သူအမှန်တကယ်သိတဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်နေဖို့အရေးမကြီးဘူးနော်။ ဘယ်လိုလူမျိုးက စာဖတ်သူ အတွက် စိတ်ဝင်စားမှုပိုစေ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသလဲ ပြီးတော့ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု ပိုဖြစ်စေသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးကြည့်ပါ။
(၆) ဖက်ရှင်အမြင်တွေ၊ ဂီတပွဲတော်တွေ၊ ပါဝင်ဆင်နွှဲတတ်တဲ့ ပါတီပွဲတွေ စသဖြင့် မကြာခဏမြင်နေရတဲ့အ၀န်းအ၀ိုင်းက လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို ဘာလို့ သေချာပေါက်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာလည်းသိရပါမယ်။ လိင်ကွဲကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်စုံ တစ်ယောက်ဟာလည်း လိင်တူတွေပျော်ရွှင်နွှဲပျော်တတ်တဲ့ ပွဲသဘင်တွေကို သဘောကျဆင်နွှဲတတ်ကြပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို သူ့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအရ သို့မဟုတ် ဖက်ရှင်အမြင်ခံစားမှုတွေအရ ဆုံးဖြတ် တန်းဖိုးထားလို့မရပါ။
(၇) ကုထုံးပညာရှင်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ကြည့်ပါ။ စာဖတ်သူရဲ့ ဖိုမလက္ခဏာဖွေရှာမှုကိစ္စအပေါ် သူတို့ အကူအညီပေး နိုင်ပါတယ်။
(၈) စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဖိုမလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းပေါင်းများစွာထုတ်ရင်း အချိန်အတော်များများကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိသားစုအပေါ် သင်ထုတ်မိနေတဲ့ မေးခွန်းများအကြောင်းရိုးသားမှုပြခဲ့ပါလျှင် အချို့သောသူတို့ဟာ ကြားလိုက်သည့်အချိန်ကစပြီး သင်ဟာ ‘သူ/သူမဟာ ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်” လို့စတင်တွက်ချက်ကြပြီးသကာလ ပုန်းနေရာကနေ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံရာမှာ ကူညီဖို့ကြိုးစားကြပါမယ်။ ဖွင့်ဟ၀န်ခံတဲ့ကိစ္စ သူတို့ကူညီရာရောက်သလား ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ သင့်ကိုယ်သင်ကူညီရာ ရောက်မလဲဆိုတာ မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ဝန်းရံပါလိမ့်မယ်။ အချို့သော လိင်ကွဲကြိုက်နှစ်သက်သူအမျိုးသားများဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂေးဖြစ်လောက်တယ်ဆိုပြီး ဒွိဟဖြစ်နေကြတာ အများအပြားရှိပြီး စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ဟာလည်း သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
(၉) အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ bisexual, gay သို့မဟုတ် lesbian ဆိုသောသူများရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ရှာဖွေစူးစမ်းကြည့်ပါ။ အားလုံးကတော့ စာဖတ်သူနဲ့ အလားတူဖြစ်စဉ်တူဆိုတာမျိုး မရှိကြပေမယ့် သူတို့ဘယ်လို ဖွင့်ဟ၀န်ခံကြသလဲဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်အဓိပ္ပာယ်ကို ရိပ်မိသိရှိနိုင်တာပေါ့။ အွန်လိုင်းပေါ်က အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေဟာ ဈာန်ဝင်စားဖို့အရင်းအမြစ်တွေဖြစ်သလို သတင်းရင်းမြစ် တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ planetout.com လို website တွေဟာ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်တွေရေးလို့ရတဲ့နေရာ၊ အခြားသောကိုယ်လိုစိတ်ဝင်စား ဆွေးနွေးချင်သူများနဲ့ သတင်းဖလှယ်ရာ အင်အားများဖြစ်နိုင်တာပဲ။ လိင်တူကြိုက်သူများ သို့မဟုတ် အခြားလူများကို ရှာကြည့်ပြီး သူတို့ကို မေးခွန်းထုတ် ဆွေးနွေးပြောဆိုပါ။ စာဖတ်သူနေထိုင်ရာဒေသရှိ အမည်မသိ အထောက်အကူပြုအုပ်စုတွေရှိရင် စာဖတ်သူလည်း တက်ရောက် လေ့လာနိုင်တာပေါ့။
(၁၀) စာဖတ်သူက ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ရတာ ပိုပျော်ရွှင်သလဲ? ဖိုမလက္ခဏာအကြောင်း တွေးမိတာအပါအ၀င်ပေါ့။ လိင်နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာခိုင်မာစွာတွေးတောကြံဆကြည့်ပါ။ (ဖက်လှဲတကင်းပြုတာ၊ နမ်းတာ စသဖြင့်) တကယ်လို့ စာဖတ်သူရဲ့တုန့်ပြန်ချက် က အာ…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ မျဉ်းကြောင်းအတိုင်း ရှည်လျားကြာရှည်နေပါလျှင် တစ်ခုသော လိင်အမျိုးအစားထက် ပိုပြီးစိတ်ကူးယဉ်တိမ်းညွှတ် လို့ရနိုင်တာပေါ့နော်။
(၁၁) စာဖတ်သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တံဆိပ်ကပ်ထားမိတာက မှားတော့မမှားပေမဲ့ စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အပေါ် မျက်ခြေပြတ် လျစ်လှူရှုမထားသင့်ပါဘူး။ အချို့သော လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်ကွဲကြိုက်အမျိုးသားတွေအပေါ်ချစ်ကြိုက်နိုင်သလို အချို့သော လိင်တူကြိုက်အမျိုးသားတွေဟာ ယောက်ျားလျာ၊ လိင်ကွဲကြိုက်အမျိုးသမီး၊ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးကြိုက် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ချစ်ကြိုက်နေနိုင်ကြပါတယ်။ လိင်ကွဲကြိုက်သူ သို့မဟုတ် LGBT အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့အဆိုအရ ဘယ်လိုတံဆိပ်မျိုး ဖန်တီးနိုင်ပါ့မလဲ။ ဖန်တီးကြည့်ပါ။
(၁၂) တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှာတော့ စာဖတ်သူဟာ အခြားဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိသိရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ် ကျရောက်မိသော စာဖတ်သူရဲ့ ခံစားချက်အပေါ် ယုံကြည်လိုက်ပါ။
(၁) စာဖတ်သူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တံဆိပ်တစ်ခုတပ်ဖို့ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကဖိအားပေးတာမျိုးခွင့်မပြုပါနဲ့။ စာဖတ်သူကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ဘယ်လိုတံဆိပ်ကပ်ကပ် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်၊ စာဖတ်သူ ဆက်ဆံချင်တဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လေ။ စာဖတ်သူရဲ့ မိဘတွေ၊ ဂေးသူငယ်ချင်းတွေ သို့မဟုတ် straight သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောဆိုကြမှာပါပဲ။ ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်နေပါစေ စာဖတ်သူဖြစ်ချင်နေတဲ့လူပုံစံအတိုင်းသာ ခံစားဖြစ်တည်လိုက်ပါ။ လျှောက်လှမ်း လာတဲ့လမ်းဟာ ရှည်ကြာနေလှပြီ ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လျှင် တစ်စက္ကန့်လေးတောင်အပြစ်ရှိတယ်ခံစားမနေဘဲ လမ်းပြောင်း လျှောက်ပါ။ စာဖတ်သူရဲ့ဘ၀ဟန်ပန် သို့မဟုတ် စာဖတ်သူရဲ့ရွေးချယ်မှု ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာစရာမလိုပါဘူး။
(၂) စာဖတ်သူရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်တန်စွမ်းသော အနုတ်လက္ခဏာဆောင် စိတ်ခံစားချက်တွေကို မူးယစ်ဆေးဝါး သို့မဟုတ် အရက်သေစာသောက်ပြီး ဖုံးကွယ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ ကြုံဆုံရသော စော်ကားပြောဆိုမှုခံစားရခြင်းတွေသည် စာဖတ်သူ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် လက်ခံဖို့ပိုမိုခက်ခဲစေတာမျိုးဖြစ်ရနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ဘ၀မှာ ကြုံဆုံရသောပြဿနာအပေါင်းအစုလေးထဲကတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ကြိုးစားမဖြတ်ကျော်ဘဲ အရေးတယူပြု ပြိုလဲသွားပါလျှင် စာဖတ်သူရဲ့ အဖျက်ကြောက်ရွံ့စိတ်တစ်ခုအဖြစ် ဦးဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
(၃) စိတ်ချရသော လိင်မှုဆက်ဆံရေးကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကျင့်သုံးပါ။ လိင်တူချင်း ပြုကျင့်ကြသော လိင်မှုကိစ္စလှုပ်ရှားမှုအစုံအလင်မှ တဆင့်ကူးဆက်နိုင်သော လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ(STIs)များသည် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ အမှတ်မထင်ပြုကျင့်ရာမှ ရရှိကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများနဲ့အတူတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါ။
(၄) စာဖတ်သူပေါင်းသင်းဆက်ဆံမယ့် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဉာဏ်ရှိရှိရွေးပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂေးဖြစ်မှန်းသိလို့ ကိုယ့်လိုပဲ အခြားဂေး များနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ အခြားတဘက်ကပြောရရင် ဂေးသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရှိခြင်းအားဖြင့် စာဖတ်သူဖြတ်သန်း ဆဲဘ၀အခြေအနေအတိုင်း အလားတူဖြတ်သန်းနေတဲ့လူများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့် တစ်စုံတရာတော့အထောက်အကူရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာက စာဖတ်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာများကို ဂရုတစိုက်ရှာဖွေဝေငှပေးတာ၊ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တာ၊ level အလိုက်ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်သောသူတွေ ရှိနေနှင့်ပြီးဖြစ်နိုင်တာကိုး။
(၅) သာမန် လိင်ကွဲတွေကိုသာစိတ်ဝင်စားသော straight ကမ္ဘာ သို့မဟုတ် straight သူငယ်ချင်းများနဲ့ အပေါင်းအသင်းမလုပ် ဖြတ်တောက် ပြစ်တာမျိုး မပြုလုပ်ပါနဲ့။ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုဆိုတာ စာဖတ်သူဘယ်လိုလူဆိုတဲ့ ပြည့်ဝစုံလင်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူနဲ့မတူ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပေါင်းသင်းနှီးနွယ်မှုတစ်ရပ် ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။
(၆) တကယ်လို့များ ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်တူခြင်းဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ကြုံဆုံရချိန်၌ စာဖတ်သူဟာ လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ် သက်သူ ဂေးဖြစ်တော့မည်လားဆိုသော နားလည်ရခက် တွန်းလှန်ငြင်းဆန်လိုသောစိတ်ခံစားချက်များ ခံစားရကောင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖိုမလက္ခဏာ ဘာလဲဆိုတာ စူးစမ်းနေသောအချိန်ကာလမှာ မွှန်ထူပြီးအတင်းအကြပ် မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ကြိုးစားတာတွေ မလုပ်ရပါဘူး။
Alex Aung (1 Nov 2016)
Posted by Alex Aung at 7:26 AM No comments:
Labels: ဗဟုသုတ, ဘာသာပြန်
Being Proud Of and Comfortable With Being Gay (Par...